Uploaded by Aung Zaw Lin
••• • • • • • • Nyd
• • •K•if•u•m;vm;?
• • • • • • [wfpuD;vm;• • • • • • • • • • • • • • •
တွေးလက်စအတွေးတွေကိုလက်စသတ်ပြီး ရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုဆီဖြည့်လိုက်သည်။
စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်တာကြောင့် ဆီပန့်မှာ ပိုက်ဆံပမာဏကိုမရိုက်ထည့်မိ။
အပြင်ဘက်ကို ငေးရင်း ဆီထည့်လိုက်တာ ဆီတွေက တိုင်ကီအပြင်ဘက်ကိုလျှံကျကုန်သည်။
ငှက်ဆိုးထိုးသံလို အသံသြသြကြီးကြောင့် သီရိလန့်ဖျတ်သွားပြီး ကိုင်ထားတဲ့ ဆီဂေါက်ကိုယောင်ယမ်းပြီးလွှတ်ချလိုက်သည်။
သီရိသူငယ်ချင်းကောင်မလေးက အလိုက်တသိဆီဂေါက်ကိုပြန်ကောက်ပြီး လိုအပ်တာတွေကူညီလုပ်ကိုင်ပေးသည်။
သီရိ ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ အတူ ခေါင်းကိုသာတွင်တွင်ငုံ့ထားလိုက်သည်။
''ကဲ...... သီရိ...။ ပိုသွားတဲ့ ဆီဖိုး ၁၄၀၀စိုက်ပေး...။ စာရင်းက တစ်နေ့ချင်းစီရှင်းတာ။''
''ဟို...ဟို... ဦး...။ သမီးလခထုတ်မှဖြတ်လို့မရဘူးလားဟင်..။ အခုလောလောဆယ် ပိုက်ဆံမရှိသေးလို့ပါဦးရယ်။''
ဆိုင်မန်နေဂျာဦးသူတော်ရဲ့ အဆီတွေဝေ့နေတဲ့ မျက်နှာကြီးက တင်းမာနေသည်။
''နင်တို့တွေ အဲဒီလိုလုပ်ပေါင်းများနေပြီ။ အမြဲတမ်းငါချည်းပဲစိုက်ပေးလို့ဘယ်ရမှာလဲ။''
www.mmpays.com •• Page 1
.... သီရိ စကားဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပဲ ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ အတူ ရင်မှာဆို့နင့်လာပြီးငိုချလိုက်တော့သည်။ ''အေး.်Кီားး Aိ်К်Х် ''သမီး...mmpays. လည်း...။ မောင်လေးကလည်း .။ ဒီနားမှာငိုမနေနဲ့။ ကျက်သရေမရှိဘူး။'' ဦးသူတော် ခပ်ငေါက်ငေါက်ပြောရင်းလှည့်ထွက်သွားသည်။ သီရိ .......။ ဒါဆိုလည်း ငါ့ရုံးခန်းလာခဲ့... အိမ်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါဦးရယ်။ တကယ်ပါ။ အခုတောင်အိမ်မှာပိုက်ဆံမရှိလို့ စားရေးသောက်ရေးခက်ခဲနေလို့ပါ။ ဒီကြားထဲအမေကလည်း ရောဂါနဲ့ တစ်ရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတာ.com Page2.....။'' မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုဖာပေါ်မှာသီရိဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဘာတွေအဆူခံရဦးမလဲမသိဘူး။ ''ဘာတွေဖြစ်လို့လဲသီရိ..... မျက်ရည်တွေ ဝေ့တက်နေတဲ့ကြားက ဘေးကနေလက်ကိုအသာဖေးမပေးသော သူငယ်ချင်းမကို မချိပြုံးလေးပြုံးပြလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းမလေးက ဦးသူတော်ရုံးခန်းရှိရာကို မျက်စပစ်ပြသည်။ မြန်မြန်လိုက်သွားဆိုသည့်သဘော.....။'' ဒီတစ်ခါတော့ ဦးသူတော်အသံက တင်းမာမနေပဲ အနည်းငယ်ချိုနေသည်လို့သီရိထင်သည်။ သီရိလည်း ၀မ်းနည်းစိတ်တို့နဲ့အတူ သူ့မိသားစုအခက်အခဲတွေကို ဇာတ်စုံခင်းပြလိုက်သည်။ ဦးသူတော် သူ့ရှေ့မှာ တရှုံ့ရှုံ့ငိုရင်း အဆင်မပြေကြောင်းတတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ ၀န်ထမ်းမလေးသီရိကိုကြည့်ရင်းမျက်လုံးတွေ အရောင်လက်လာသည်။ သူ့မျက်လုံးတွေကို မှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင် တဏှာခိုးတွေဝေနေမည်ထင်သည်။ www. သီရိ လေးကန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဦးသူတော်ရုံးခန်းကိုခြေဦးလှည့်လိုက်သည်။ ''ထိုင်.
ြို်Кာားး၊ .
.....'' ဦးသူတော် တစ်ချက်ခေါ်လိုက်တော့ ခေါင်းငုံ့ထားတဲ့ သီရိမော့ကြည့်သည်။ သီရိမျက်လုံးတွေက ငိုထားလို့ မို့အစ်နေပြီး နှာခေါင်းလေးတွေက နီနီလေးဖြစ်နေသည်။ ''သမီး အဆင်မပြေတာတွေ လတ်တလောအဆင်ပြေသွားချင်လား။'' ''ရှင်.။ သမီးဆီမှာ ဘာမှပေးစရာမှမရှိတာ...။'' သီရိ ၀မ်းနည်းသလိုလေးနဲ့ ပြန်ပြောမိသည်။ ''ရှိပါတယ်သမီးရယ်ရှိပါတယ်။ ရှိတာမှကောင်းကောင်းကြီးကိုရှိတာပါ။'' ဦးသူတော်စကားပြောရင်းကနေ သီရိတစ်ကိုယ်လုံးကို အဓိပ္ပာယ်ပါပါနဲ့ ဝေ့ပြီးကြည့်လိုက်သည်။ www..mmpays. ဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး။'' သီရိ မျက်လုံးလေးအ၀ိုင်းသားနဲ့ ပြန်မေးမိသည်။ ''ဒီလိုပါ။ အခု ဦးတို့ သူဌေးက သဘောကောင်းတယ်လေ။ အပေးအကမ်းလည်းရက်ရောတယ်။ ဦးပြောပေးမယ်ဆိုရင် သူဌေးက သမီးကိုသနားပြီး သမီးရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးမှာပါ။'' ''သမီးကလည်း သူဌေးကိုကျေးဇူးမမေ့နဲ့ပေါ့။ သမီးဘက်ကနေတတ်နိုင်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပေါ့။'' ''ဒါ...်Кီားး Aိ်К်Х် တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေတဲ့ကိုယ်လုံးလေးက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေး. ဒါပေမဲ့ဦးရယ်.။ ဦးလည်းသိတာပဲဟာကို....com Page3...။ အသားတွေက ပွဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်မနေပဲတင်းရင်းနေသည်။ ကိုယ်လုံးလေးက တစ်ချက်တစ်ချက်တုန်တုန်တက်သွားတိုင်း ရင်သားလုံးလုံးလေးတစ်စုံက တုန်တုန်သွားသည်။ ခါးလေးကသေးသေးကျင်ကျင်လေး။ ခါးလေးရဲ့အောက်မှာစွင့်ကားနေသော တင်ပါးကြီးတစ်စုံ။ 'ဒီကောင်မလေးဖင်တော်တော်တောင့်တာပဲ။' သီရိကိုကြည့်ရင်း ဦးသူတော်စိတ်ထဲကတွေးမိသည်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်ရဲ့ ၀တ်စုံ အစိမ်းရောင် စကတ်တိုလေးအောက်က ပေါင်နှစ်ချောင်းက ဖွေးပြီးဥနေသည်။ ဦးသူတော် ရုတ်ကရက်ထပြီး ဖက်နမ်းပစ်ချင်စိတ်တွေကိုမနည်းထိန်းချုပ်နေရသည်။ ''သမီး.
...com Page4...mmpays....။'' သီရိ လက်လေးနှစ်ဘက်ကို ရင်ဘတ်ရှေ့မှာကာပြီးအလန့်တကြားထပြောမိသည်။ 'ဒါဆို..တော့. သူပြောတာ...်Кီားး Aိ်К်Х် ''ဒါ.။ မဖြစ်သေးပါဘူး။' သီရိ အတွေးတွေဆက်တိုက်တွေးရင်းဘာမှမပြောပဲငြိမ်ကျသွားသည်။ ''ရတယ်သမီး။ ဦးက ဇွတ်အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး။ သမီးမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုလို့ ဦးက စေတနာနဲ့ ပြောပြတာပါ။ သမီးစဉ်းစားဦးလေ။ တစ်နေကုန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရသေးတာပဲ။ ညနေ ဂျူတီပြီးရင် သမီးဆန္ဒကို ဦးကိုလာပြောပေါ့။ သမီးအခက်အခဲတွေပြေလည်သွားမှာပါ။'' ''သမီးသွားလို့ရပြီ။'' သီရိ ဦးသူတော်ရဲ့ ရုံးခန်းထဲကနေ လေးကန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့သည်။ အဲကွန်းဖွင့်ထားလို့ အေးစိမ့်နေတဲ့ရုံးခန်းထဲမှာတောင် သီရိကိုယ်မှာချွေးလေးတွေစို့နေသည်။ ''ဘ၀ကလည်းဆိုးလိုက်တာနော်။'' သီရိတစ်ကိုယ်တည်းခပ်ညည်းညည်းဆိုရင်း အလုပ်ဆက်လုပ်နေလိုက်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းကမေးတာတောင်ပြန်မဖြေမိ။ ဒီလိုပါပဲဆိုပြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ပဲဖြေလိုက်မိသည်။ ဒီကိစ္စဆိုတာ ပြန်ပြောလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာကို။ အလုပ်ပြီးတော့ သီရိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခပ်ရဲရဲပဲချလိုက်တော့သည်။ ဖြစ်လာသမျှကိုခါးစည်းပြီးခံရမည်။ အဓိက က မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့ဖြစ်သည်။ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကြီးမျက်နှာကိုမြင်ယောင်ရင်း မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို အညစ်နွမ်းခံလိုက်မည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဂျူတီသိမ်းတော့ ဦးသူတော်ရုံးခန်းကိုသွားတဲ့ သီရိခြေလှမ်းတွေက သွက်လက်နေသည်။ လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ အားအင်တွေမွေးထားလိုက်ပြီမဟုတ်ပါလား။ www. သူဌေးနဲ့ အိပ်ရမှာပေါ့။ သူဌေးရဲ့ဖျက်ဆီးတာကိုခံရတော့မှပေါ့။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကမသန့်ရှင်းတော့ပဲညစ်နွမ်းသွားမှာ.. ဒါ...
com Page5.. လာ.......။ မိခင်ကြီးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်ပေးပြီး အ၀တ်လျော်၊ ဟင်းချက် ၊ ထမင်းစား ဗာရီယတွေအားလုံးလုပ်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ မနက်ဖြန်ကြုံရမဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက သီရိအတွက် အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်လာတော့မည်။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင် သီရိရဲ့ ဘ၀တိုက်ပွဲစရတော့မည်။ သီရိဝမ်းနည်းလာတာနဲ့ တိတ်တိတ်လေးကျိတ်ပြီးငိုမိသည်။ အိမ်လေးက တဲသာသာပဲရှိတာကြောင့် တစ်ဖက်အခန်းက မိခင်ကြီးနဲ့ ဘေးနားမှအိပ်နေတဲ့မောင်လေးကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် ခေါင်းအုံးကိုမျက်နှာအပ်ပြီး တအိအိနဲ့ ရှိုက်ငိုနေမိသည်။ မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ တစ်အိမ်သားလုံးအတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ အလုပ်ကိုထွက်လာခဲ့သည်။ အလုပ်ကိုရောက်တော့ မန်နေဂျာကြီး ဦးသူတော်ကရောက်နေနှင့်ပြီ။ ''ဒီနေ့စောသားပဲ။'' သီရိတစ်ကိုယ်လုံးကိုဝေ့ကြည့်ရင်းတဏှာသံကြီးနဲ့ ပြောသည်။ ဦးသူတော် သီရိဆိုတဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကောင်မလေးကိုကြည့်ရင်း ရမက်တွေကြွနေသည်။ ''ဆရာ့အတွက်ပြီးရင်တော့ ဒီကောင်မလေးကို ခြေတော်တင်ဦးမှပါပဲ။'' ''ကဲ.. ကားပေါ်တက်။'' ရုံးခန်းရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့ ကားအကောင်းစားကြီးကို တံခါးဖွင့်ပေးရင်းပြောသည်။ သီရိ ဆိုင်ဝန်းထဲကို တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်မလေးတွေက ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်နေကြသည်။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ ဦးသူတော်ပြောတဲ့ ကိစ္စကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ကိုလမ်းလျောက်ပြန်ခဲ့သည်။ သီရိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့ အိမ်က သိပ်မဝေး။ သီရိအိမ်ကမြို့စွန်က တဲကုတ်သာသာအိမ်လေးသာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်ဆိုတာကလည်း မြို့စွန်မှာရှိတာဆိုတော့ သီရိအတွက် သွားရေးလာရေးက အဆင်ပြေပါသည်။ သီရိတစ်ညလုံးကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရ.mmpays.
.။ ကာမဆက်ဆံဖို့သွားတာ။ ပိုပြီးသေသေချာချာပြောရရင် ပိုက်ဆံမရှိသူမိန်းကလေးတစ်ယောက် ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် ငွေရှိလူတန်းစားတစ်ယောက်ဆီမှာသွားပြီး အသုံးတော်ခံရမှာ။ www..... '' သီရိ..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ အရမ်းဝမ်းနည်းသွားသည်။ သူတို့ အမြင်မှာသီရိ မိန်းမပျက်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီ။ သီရိ သက်ပြင်းမောကိုသာ ကျိတ်ချရင်း ဦးသူတော်ရဲ့ကားကြီးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်သည်။ 'ကားကြီးကကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူး။' ကားအဲကွန်းနဲ့ အဲဖရက်ရှာနံ့သင်းသင်းကြောင့် သီရိစိတ်တွေနည်းနည်းကြည်လင်လာသည်။ ''ဦး. ဘယ်သွားမလို့လဲဟင်.... ပေါင်တွေကို တစ်ခြားဘက်ကပ်လိုက်ရင်း လက်ကလည်း ဦးသူတော်လက်ကြီးကိုဖယ်လိုက်သည်။ ဦးသူတော်က အလျော့မပေးပဲ သီရိပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးတွေကို လက်နဲ့ လှမ်းပြီး ဖျစ်ညှစ်လိုက်တာ လက်ချောင်းရာတွေထင်သွားသည်။ ''ဦးရယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်။ ကြောက်...com Page6. ကြောက်လို့ပါ။'' သီရိ ကတုန်ကယင်လေးပြောရှာသည်။ တစ်ဆက်တည်းပင် ဦးသူတော်ပြောတာကိုလက်ခံမိတာမှားများမှားသွားပြီလားဆိုပြီး ပြန်တွေးမိသည်။ သီရိ ကြောက်ရွံ့စိတ်တို့နဲ့အတူ ရင်ထဲမှာလည်း တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေသည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခုသွားနေတဲ့ခရီးက ကောင်းသောသွားချင်းမဟုတ်..mmpays.။'' ''ရောက်တော့သိမှာပေါ့သမီးရယ်။ သူဌေးနဲ့ချိန်းထားတယ်။'' ဦးသူတော် ဘာမှဆက်မပြောပဲ ကားကိုဂရုစိုက်ပြီးမောင်းနေလိုက်သည်။ ကားသာမောင်းနေရတာစိတ်ကတော့ ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ သီရိဆီကိုရောက်နေသည်။ ကောင်မလေးက မော်လမြိုင်သူပီပီ အသားဖြူဖြူ၊ ရင်သားလုံးလုံးကျစ်ကျစ်နဲ့ တင်သားတွေက ကားထွက်နေသည်။ ဦးသူတော်ကားမောင်းရင်းစိတ်မထိန်းနိုင်တော့တာနဲ့ စကတ်တိုလေးအောက်က ပေါင်တန်ဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ပွတ်သတ်လိုက်သည်။ ''အို..
။ သီရိတို့နေတဲ့ နေရာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မြို့စွန်က ခြံဝန်းကြီးတစ်ခြံထဲရောက်တော့ကားကိုရပ်လိုက်သည်။ ''ဆင်းလို့ရပြီ သီရိလေး.com Page7....... ဒီလူကြီးကလည်း နှာဘူးကြီး။ သီရိသိတာပေါ့။ သီရိတစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်လိုက်တိုင်းစားမလို ၀ါးမလိုနဲ့ ကြည့်နေကျ။ ပြီးတော့ ဆီဆိုင်က ကောင်မလေးတွေကို ရုံးခန်းထဲခေါ်ခေါ်ပြီး ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲတော့မသိ။ ကောင်မလေးတွေ ငိုယိုပြီးထွက်လာတာတော့ သုံးလေးခါတွေ့ဖူးသည်။ ဒီလူကြီးလည်း နှာဘူးကြီးပါပဲ. သီရိ တစ်ယောက်ထဲပေါက်ကရတွေလျောက်တွေးရင်း တိုးတိုးလေးရယ်မိသည်။ ''အေးလေ..။'' ဦးသူတော်ကားမောင်းနေရင်းက သီရိရယ်တာကိုတွေ့ပြီး သူတွေးချင်ရာတွေတွေးပြီးလျှောက်ပြောနေပြန်သည်။ ပြောသာပြောတာ..။'' ဦးသူတော် ကားတံခါးဖွင့်ပေးရင်း ပြီတီတီကြီးနဲ့ပြောသည်။ သီရိ ဦးသူတော်ကို မချိပြုံးလေးပြုံးပြပြီး ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်။ ရုပ်ရည်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်က အနားကပ်လာပြီး ဦးသူတော်ကို တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ပြောနေသည်။ ဘာတွေပြောနေလည်းမသိဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သီရိအရမ်းကြောက်လာပြီ။ သီရိစိတ်ထဲမှာ ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပဲရှိတော့တယ်။ ဘာမှန်းလည်းမသိကြဘူး။ ယောက်ျားသားတွေကြားထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲသော မိန်းမပျိုလေး။ ဥပမာပေးရရင် ကျားရဲတွင်းထဲက ယုန်ဖြူမလေးတစ်ကောင်လိုပဲကြောက်နေရသည်။ ''သမီးလာ......်Кီားး Aိ်К်Х် ရပ်ကွက်ထဲက မိန်းမတွေခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သီရိသူ့ သူဌေးဆီကို အလိုးခံဖို့သွားနေတာပေါ့။ အလိုးခံတယ်ဆိုတော့ အလံခိုးတာပေါ့။ ဟားဟား.. ။'' ဦးသူတော် ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို ခေါ်သွားပြီး အခန်းတစ်ခန်းကို တံခါးအသာဖွင့်ပြီး သီရိကိုဝင်ခိုင်းသည်။ ''သူဌေး လာနေပြီတဲ့။ ဒီအခန်းထဲမှာပဲခဏစောင့်။'' www....။ အခုလိုဆိုတော့ သမီးလည်းအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကွာ..mmpays...
.com Page 8 ...mmpays.. ချမ်းသာတဲ့လူတွေကျတော့လည်းချမ်းသာလိုက်ကြတာနော်...။'' ဘယ်သူမှမကိုင်ဖူးသေးတဲ့ အပျိုမလေးရဲ့ နို့အုံနုနုလေးနှစ်လုံးကို ကိုင်နေတဲ့ လက်ကြီးတစ်စုံကကြမ်းတမ်းလှသည်။ သီရိ နာကျင်လွန်းတာနဲ့ အား........ စပရင်မွေ့ယာဆိုတာဒါပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။'' သီရိ မွှေ့ယာအထူကြီးပေါ်မှာ အိစက်တဲ့အထိအတွေ့တွေခံစားရင်းမှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ နို့လေးနှစ်လုံးဆီက နာကျင်တဲ့အထိအတွေ့တွေနဲ့ သီရိတစ်ယောက်လန့်နိုးလာခဲ့သည်။ သီရိ ကြောက်လန့်တကြားမျက်လုံးဖွင့်ကြီးလိုက်တော့ အသားညိုညို ခပ်၀၀လူကြီးတစ်ယောက်က ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ သီရိကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာအုပ်မိုးပြီး ဖိထားသည်။ လူကြီးရဲ့ လက်နှစ်ဘက်က သီရိနို့လေးနှစ်လုံးကို အကျီပေါ်ကနေပဲ အားရပါးရညှစ်နေသည်။ ''အား.်Кီားး Aိ်К်Х် ဦးသူတော် သီရိကိုအခန်းထဲ မသိမသာတွန်းလွှတ်ရင်းပြောသည်။မသိမသာတွန်းလွှတ်တယ်ဆိုတာထက် သီရိရဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်ဝတ်စုံစကတ်တိုလေးအောက်တင်သားကြီးတစ်စုံကို ဖြစ်ညှစ်ရင်းအခန်းထဲတွန်းလွှတ်လိုက်တာဖြစ်သည်။ သီရိ အိပ်ခန်းကို မျက်လုံးလေးအပြူးသားနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်မိသည်။ သူဌေးကတော်တော်ချမ်းသာတာာပဲ။ အိပ်ခန်းက သီရိတို့ အိမ်တစ်လုံးသာလောက်ရှိတယ်။ အခန်းထဲမှာလဲ မွှေးပွကော်ဇောတွေနဲ့၊ တီဗီပြားပြားကြီးကလဲ အကြီးကြီးပဲ။ တံခါးတစ်ချက်ကိုတွေ့လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာတွဲရက်လုပ်ထားတာကိုတွေ့သည်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့ ရေစိမ်ချိုးလို့ရတဲ့ ကြွေဇလုံကြီးလည်းတွေ့သည်။ ''ဟူး.။ ငါတို့ဘ၀နဲ့များကွာပ။'' သီရိတစ်ယောက်ထဲ ငြီးရင်း အခန်းထဲက မွေ့ယာကြီးပေါ်ကို ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲချလိုက်သည်။ သီရိကိုယ်လုံးလေး ပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပြီး အိကနဲပြန်ကျလာသည်။ ''အင်း. ကနဲ အသံရှည်ဆွဲပြီးအော်လိုက်သည်။ www...... နာလိုက်တာ..
com Page9..mmpays...။ သီရိရဲ့ ယူနီဖောင်းအကျီလေးကို ထိုလက်ကြီးတစ်စုံက စုံကိုင်ပြီးဆွဲဖြဲလိုက်သည်။ ဗြိကနဲမြည်သံနဲ့ အတူ သီရိရဲ့ မိန်းမ၀တ်ရှပ်အကျီအဖြူလေးက ကြယ်သီးတွေ ပြုတ်ထွက်ပြီးပြဲသွားသည်။ အပေါ်အကျီရင်ဘတ်က ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားတော့ ဖြူဖွေးတဲ့ရင်ဘတ်လေးကပေါ်ထွက်လာသည်။ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားတော့ ၀တ်ထားတဲ့ အပြာရောင် ဘရာဇီယာနွမ်းနွမ်းလေးကပေါ်ထွက်လာသည်။ သီရိရဲ့ ဖွံ့ထွားပြီး အယ်နေတဲ့ရင်သားထွားထွားတစ်စုံကို အပြာရောင်ဘရာနွမ်းနွမ်းလေးက လုံအောင်မဖုံးနိုင်ချေ။ ရင်သားအပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်လောက်က ဘရာပေါ်ပိုင်းမှာ မို့ပြီးဖောင်းတက်နေသည်။ သီရိအပေါ်မှာတက်ဖိထားတဲ့လူဝကြီးဆီက ဂွပ်ခနဲ တံတွေးမျိုချသံတစ်ချက်ကြားပြီး သီရိ ဘရာလေးလေးက ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ဆွဲပြီးချွတ်လိုက်သည်။ ချိတ်တပ်ထားတဲ့အပ်ချည်ကြိုးတွေကလည်း ကြာလို့ဆွေးနေပြီထင်သည်။ ဘရာစီယာအပြာရောင်နွမ်းနွမ်းလေး ချိတ်တွေပါပြုတ်ထွက်သွားပြီး သီရိအပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားသည်။ သီရိရဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနို့လေးနှစ်လုံးက အကာအကွယ်မရှိပဲ ပေါ်ထွက်လာသည်။ နို့အုံထွားထွားလေးက တင်းတင်းဖောင်းအိနေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ပန်းနုရောင်သန်းကာ ကောင်းကောင်းပင်စူမထွက်သေး။ သူဌေးက သီရိရဲ့ကောင်းကောင်းစူမထွက်သေးတဲ့ နို့သီးခေါင်းပန်းရောင်လေးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပြီး စကတ်ကိုချွတ်ဖို့ပြင်သည်။ အပေါ်အကျီနဲ့ဘော်လီကတော့ သူဌေးလက်ချက်နဲ့ ရစရာမရှိအောင် စုတ်ပြဲသွားချေပြီ။ နောက်ဆုံးလက်ကျန် စကတ်တိုလေးကိုပါဆွဲဖြဲခံလိုက်ရရင်တော့ အ၀တ်မပါကိုယ်ဗလာနဲ့ အိမ်ပြန်ရတော့မည်။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိအော်သံကြောင့် လက်ကြမ်းကြီးတစ်စုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်သွားသည်။ ရပ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ ခပ်ကြာကြာမဟုတ်။ တခဏမျှသာ.
.'' အပျိုစင်မလေး သီရိရဲ့ နာနာကျင်ကျင်အော်သံလေးက အခန်းထဲမှာစူးစူးဝါးဝါးထွက်ပေါ်လာသည်။ သူဌေး က လက်တစ်ဖက်နဲ့ အဖုတ်နှစ်ခြမ်းကို အားရပါးရဖြဲထားပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ လိင်တန်ကြီးကိုကိုင်ကာ အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီးတာနဲ့ တစ်ချက်ထဲဆောင့်ထိုးလိုက်တော့သည်။ ''အား..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ နို့အုံတွေဆီက နာကျင်မှုတွေကြားကပဲ ...........။ www.. လီးကြီးခေါက်သလိုဖြစ်သွားပြီး ဘေးကိုချော်ထွက်သွားသည်။ ''အား..... သမီးချွတ်ပေးပါ့မယ်။'' ကပျာကယာပြောရင်း စကတ်လေးကို အမြန်ချိတ်ဖြုတ်ပြီးဆွဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ စကတ်ချွတ်ရင်းနဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ အတွင်းခံလေးကိုပါတစ်ခါထဲဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ အမွှေးရေးရေးလေးသာပေါက်သေးတဲ့ သီရိရဲ့ ဆီးခုံလေးပေါ်လာသည်။ အဲဒီအောက်မှာတော့ အပျိုစင်မလေးရဲ့ နုနုထွတ်ထွတ်အဖုတ်လေး။ အဖုတ်လေးက ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တင်းတင်းဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေသည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက စိကပ်နေသည်။အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေကိုမတွေ့ရ။ သူဌေးလူဝကြီးခမျာ ကောင်မလေးငယ်ငယ်ချောချောလေးရဲ့ အဖုတ်လှလှအသစ်စက်စက်လေးကိုတွေ့ရပြီး နှာမှုတ်သံတွေတရှုးရှုးထွက်လာသည်။ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ အဖုတ်လေးရဲ့ ဘေးနှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုအသာဖြဲပြီး နီရဲပြီးမတ်ထောင်နေတဲ့ အတန်ကြီးကို ထိုးထည့်တော့သည်။ အဖုတ်လေးက အရည်မထွက်သေး။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့အဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးအတွက် ထိုးထည့်လိုက်တဲ့လိင်တန်ကြီးက ကြီးမားလွန်းနေသည်။ မ၀င်.....mmpays. ''ဦး....... '' သီရိ အော်သည်။ အော်တာမှ အာခေါင်ကိုခြစ်ပြီး အော်တာ...com Page 10 .
com Page 11 ..mmpays.... သူဌေးအလှည့်ပြီးရင်တော့ ငါ့အလှည့်ရောက်လောက်ပါတယ်လေ။ '' သူဌေးရဲ့ တစ်ချက်ထဲအဆုံးထိသွင်းချက်ကြောင့် သီရိအဖုတ်လေးထဲက သွေးလေးတွေစိမ့်ပြီးထွက်လာသည်။ သူဌေးလူဝကြီး သူ့ဗိုက်အောက်ကို ငုံ့ကြည့်တော့ လီးကြီးက အဖုတ်လေးထဲမှာ အဆုံးထိဝင်ပြီး ဆီးခုံနှစ်ခုကထိကပ်နေသည်။ ကောက်ကောက်ကွေးကွေး အမွှေးတွေကြားမှာသွေးစလေးတွေကပ်ညိနေသည်။ ကောင်မလေးရဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အဖုတ်လေးက သူ့အတန်ကြီးကို ဆုတ်ပြီးညှစ်ထားသလို တင်းကြပ်နေသည်။ သူဌေး ရမက်ဇောတွေတက်ကြွလာပြီး သူ့ အတန်ကြီးကို အဖုတ်လေးထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ဆောင့်လိုက်နဲ့ ဆောင့်တော့သည်။ ဆောင့်တာမှ သီရိကိုယ်ပေါ်မှာ အားရပါးရမှောက်ပြီးဖိဖိပြီးဆောင့်တာ။ သီရိခမျာ သူဌေးရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးက သူ့ပေါ်တက်ဖိထားတာကြောင့် အသက်ရှုမ၀ဖြစ်ပြီး လေကိုအငမ်းမရရှိုက်ပြီး ရှုနေရသည်။ ဒီကြားထဲ သူဌေးရဲ့လိင်ချောင်းကြီးကလည်း သူမအဖုတ်လေးထဲမှာ စို့ကြီးရိုက်ထားသလို တင်းကြပ်ပြီး တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်နေသည်။ သူဌေးကတော့ မညှာမတာနဲ့ ဖင်ကြီးကိုမြှောက်လိုက်ပြန်ဖိချလိုက်နဲ့ အားရပါးရလုပ်နေသည်။ သူဌေးရဲ့ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ သီရိရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုခံစားရသည်။ နာလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်နဲ့စီးကျနေမိသည်။ ဆိုးလိုက်တဲ့ကံတရား. ၊ မိန်းမတွေဘာလို့ယောက်ျားယူတာလဲဆိုတာ သီရိစဉ်းစားလို့မရလောက်အောင်ပင်နာကျင်လွန်းလှသည်။ www..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ အော်သံက အခန်းအပြင်ဘက်အထိလွင့်ပြန်သွားသည်။ အခန်းအပြင်မှာ လက်နောက်ပစ်ပြီး ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်နေတဲ့ ဦးသူတော်အတွက်တော့ သီရိရဲ့အော်သံစူးစူးလေးက ပိုပြီးမရိုးမရွဖြစ်စေသည်။ ဦးသူတော်အောက်က အတန်ကြီးက ပုဆိုးအောက်မှာငေါငေါကြီးထွက်နေသည်။ '' ဟူး.
com Page 12 .။ အသားမည်းမည်း လူက၀၀နဲ့ ...mmpays.....။ လူဝသလောက်တဏှာကလည်း ကြီးသည်။ သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကို နာကျင်အောင်မညှာမတာဆက်ဆံတတ်သည်။ အခုလည်း သူပိုင်တဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်က အရောင်းစာရေးမလေးကို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးခြေတော်တင်ပြန်သည်။ ဦးသာဒင်တစ်ယောက် သူ့လီးကြီးကို သားရေကွင်းနဲ့ညှစ်ထားသလိုတင်းကြပ်နေတဲ့ အဖုတ်လေးကို အရသာရှိရှိနဲ့အားရပါးရလုပ်နေသည်။ ကောင်မလေးကို နှုးနှုပ်ပြီးမလုပ်ပဲ ခပ်မြန်မြန်လုပ်တာ အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိသည်။ ပထမတစ်ချက်က အလုပ်တွေများလွန်းတဲ့ ဦးသာဒင်အတွက်အချိန်လုံးဝမရှိ။ ဘယ်အချိန်အလုပ်တွေပေါ်လာပြီးထသွားရမယ်မသိပေ။ ထို့ကြောင့်ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာ ကိစ္စပြီးအောင် မြန်မြန်သွက်သွက်နဲ့ အားရပါးရလုပ်နေတာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ချက်က သူလိင်ဆက်ဆံတိုင်း တစ်ဖက်သားမိန်းကလေးနဲ့ နှစ်ဦးသား သူကောင်းကိုယ်ကောင်းလုပ်တတ်သည်မဟုတ်။ တစ်ဖက်သားမိန်းကလေးကို တမင်တကာနာကျင်အောင်လုပ်တတ်သည်။ မိန်းကလေးက နာလို့အော်တဲ့အသံတွေက သူ့အတွက် န၀င်ပီယံရှိလွန်းပြီး သူ့လိင်တန်ကြီးကို ပိုပြီးသန်မာစေသည်လို့ထင်သည်။ အဲဒီအကြောင်းအချက်တွေကြောင့် သီရိ ခမျာ.. သူမရဲ့အပျိုစင်ပန်းလေးကို နာနာကျင်ကျင်နဲ့ဆက်သနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အချက် ငါးဆယ်လောက် အားရပါးရဆောင့်ပြီးတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်လေးက တင်းကြပ်လွန်းတာနဲ့ ဦးသာဒင်တစ်ယောက် မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်ရင်း ကိစ္စပြီးသွားတော့သည်။ သူ့ အချောင်းကြီးကို အဖုတ်လေးထဲ သွင်းထားပြီးသုတ်တွေကို တဆတ်ဆတ်န့ပဲန်းထုတ်နေလိုက်သည်။ သူ့ ကိုယ်လုံးမည်းမည်း၀၀ကြီးကတော့ ဖြူဖွေးနေတဲ့သီရိကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာမှောက်ရက်ကြီး။ www..်Кီားး Aိ်К်Х် သူဌေးကတော့ သီရိငိုလေ ၊ သူက ပိုပိုပြီးဖိဆောင့်နေပေသည်။ သီရိကို အားရပါးရတက်ဆောင့်နေတဲ့သူဌေးနာမည်က ဦးသာဒင်.
။'' ဦးသူတော် ပြာပြာသလဲနဲ့ ဖြေသည်။ သူဌေးထွက်သွားပြီ။ ဦးသူတော် တစ်ယောက် သူဌေးကားခြံထဲကနေထွက်သွားတဲ့အထိစောင့်ပြီး သီရိရှိနေတဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။ အခန်းအလယ်က ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်တုံးလုံးလေးနဲ့ ပက်လက်လေးအိပ်နေတဲ့ အသားဖြူဖြူချောချောကောင်မလေးကိုကြည့်ရင်း ဦးသူတော် အ၀တ်အစားတွေကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ www....။ ဟုတ်ကဲ့... စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဦးသာဒင်ဖုန်းကကောက်မြည်လာသည်။ အရေးကြီး အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ အ၀တ်အစားတွေကမန်းကတန်းကောက်ဝတ်ပြီးထွက်သွားသည်။ ထွက်မသွားခင် တစ်သောင်းတန်နှစ်အုပ်ကို စားပွဲပေါ်တင်သွားသည်။ သိန်းနှစ်ဆယ်။ သိန်းနှစ်ဆယ်နဲ့ တန်အောင်ပင် လုပ်ရတာကောင်းလွန်းလှသည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ ပက်လက်လေး နဲ့ သူ့ကိုငေးနေတဲ့ကောင်မလေးကို တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး အခန်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့သည်။ အပြင်ရောက်တော့ ဆိုင်မန်နေဂျာဦးသူတော်နဲ့တန်းတွေ့သည်။ ''ဆရာ.။ ဒီကောင်မလေးကို ပြန်ပို့လိုက်တော့။ ငါပြန်ပြီ။'' '''မင်းကိုနောက်မှ ရာထူးထပ်တိုးပေးမယ်။ နောက်ထပ်အသစ်ကလေးတွေရှိရင်လဲ ပြောပေါ့ကွာ။'' ''ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ...်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ အဖုတ်ထဲကနာကျင်မှုနဲ့အတူ ပိနေတဲ့ကိုယ်လုံးကြီးကြောင့်နေရတာခက်လှသည်။ တီ..... တီ..mmpays...com Page 13 .. တီ...... ပြန်တော့မလို့လား။'' ခြေသလုံးကို ကုန်းနမ်းတော့မလောက်ခေါင်းကိုငုံ့၊ ခါးကုန်းပြီး ဦးသူတော်မေးသည်။ ''အေး.
်Кီားး Aိ်К်Х် ချက်ချင်းပြန်မပို့သေးပဲ သူဝအောင်လိုးလိုက်ဦးမည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ဒူးထောင်ပေါင်ကားနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ပေါင်ကြားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အဖုတ်လေးက ဖွေးပြီးနီဥနေသည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေမှာသွေးစလေးတွေကပ်ညိနေသည်။ အတန်ကြီးတစ်ရမ်းရမ်းနဲ့ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဦးသူတော်ကို တွေ့သွားတော့ သီရိ ကြောက်သွားသည်။ စောစောကပဲ သရဲသဘက်စီးသလိုနဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်က သူမကို ရက်ရက်စက်စက်ကျင့်ကြံသွားခဲ့သည်။ အခုလည်းလာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်။ သူမရဲ့ဆိုင်မန်နေဂျာ တဏှာရူးကြီး ဦးသူတော်။ ဦးသူတော် အိပ်ခန်းထဲကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ၀င်လာသည်။ ဦးသူတော်ရဲ့ပေါင်ကြားထဲက လိင်တန်ကြီးက ထောင်မတ်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေသည်။ ဒစ်ဖျားကြီးက မရမ်းသီးကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့တူသည်။ ဦးသူတော် အတန်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ သီရိအနားကိုချဉ်းကပ်လာသည်။ သီရိ ဦးသူတော် သူ့နားကပ်လာတာကိုတွေ့တော့လွတ်မြောက်လိုလွတ်မြောက်ငြား ကုန်းရုန်းထပြီး ဖင်လေးတရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ကုတင်ခေါင်းရင်းကိုတိုးသွားသည်။ စိတ်တွေကြွနေတဲ့ ဦးသူတော်ရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာ ဒူးခေါင်းလေးနှစ်လုံးထောင်ကာစိထားပြီး ၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို အရှက်ပြေလိုပြေငြားဖုံးထားတဲ့ သီရိအသွင်သည် အလွန်စွဲမက်စရာကောင်းလှသည်။ ဦးသူတော် အတွက် သီရိနဲ့ ကာမဆက်ဆံဖို့ အချိန်များများမရှိ ။ သူဌေးဦးသာဒင်ရဲ့ တပည့်တွေအတို့အထောင်လုပ်ရင် သူပါအလုပ်ပြုတ်သွားမည်။ ဦးသူတော် ကုတင်ကြီးပေါ်တက်လိုက်ပြီး သီရိနားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ ''သီရိ.. သမီး.com Page 14 ..mmpays...။ ဦးရဲ့ လီးကြီးကိုလာစုတ်ပေးဦးကွယ်။'' www...
. လီးလာစုတ်စမ်း... ဟင့်အင်း...။ လိမ္မာတယ်။'' ''ဟင့်အင်း...။'' သီရိ ခေါင်းကို ရမ်းရင်း ကုပ်ကုပ်လေးထိုင်နေသည်။ ''သီရိ..mmpays.်Кီားး Aိ်К်Х် ဦးသူတော်ရဲ့ အပြောကချိုသာနေသော်လည်း အပျိုမလေးသီရိအတွက် ဦးသူတော်ရဲ့ စကားကအလွန်ပင်နားရှက်စရာကောင်းလှသည်။ သီရီကြောက်လွန်းလို့ တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီး ခေါင်းကိုသာတွင်တွင်ခါယမ်းပြမိသည်။ ''လာပါဆိုကွာ.။ ငါကောင်းကောင်းပြောတုန်းလာစုတ်နော်။ အသားအနာမခံချင်နဲ့။'' ဦးသူတော်ဒေါသထွက်ပြီး စကားတွေက ကြမ်းတမ်းလာသည်။ သီရိကတော့ခေါင်းကိုသာအတွင်ရမ်းနေသည်။ ဦးသူတော် သီရိနားကပ်ပြီး သီရိခေါင်းလေးကိုချုပ်ကာ ပါးစပ်ထဲသူ့အတန်ကြီးကိုအတင်းထိုးထည့်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ သီရိ ပါးစပ်ကိုတင်းတင်းစေ့ရင်း ခေါင်းကိုဘယ်ညာရမ်းရင်းရှောင်နေသည်။ ဦးသူတော် သူ့အတန်ကြီးကို သီရိပါးစပ်လေးထဲဘယ်လိုမှထိုးထည့်လို့မရ။ ဦးသူတော် ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ သီရိပါးကို တအားရိုက်ချလိုက်သည်။ သီရိပါးနဲ့ ဦးသူတော်လက်ကြမ်းကြီးထိတွေ့သံက ဖြန်းကနဲ အခန်းထဲမှာကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်။ သီရိကိုယ်လုံးလေးတစ်ပတ်လည်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လန်ကျသွားသည်။ ဦးသူတော် သီရိခေါင်းလေးနားကပ်သွားရင်း ပါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းညှစ်လိုက်သည်။ သီရိပါးစပ်လေးအနည်းငယ်ဟလာသည်နှင့် သူ့အတန်ကြီးကို သီရိပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်။ ဦးသူတော်ရဲ့ လိင်တန်ကြီးက သီရိပါးစပ်လေးထဲကို မဆန့်မပြဲကြီးတိုးဝင်လာသည်။ ဦးသူတော်ရဲ့ အတန်ကြီးဆီက ငံကျိကျိအရသာကြောင့် သီရိပျို့တက်လာသည်။ www.....com Page 15 ..
။'' ဦးသူတော်အတန်ကြီးကသီရိအဖုတ်လေးထဲ အဆုံးထိဝင်သွားပြီ။ သီရိအော်သံစူးစူးလေးကလည်း အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေသည်။ အနာပေါ်ဒုတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ ပထမတစ်ခါလုပ်ထားလို့ အပျိုမှေးပေါက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာပေါ်ကို ပထမတစ်ခါထက်ကြီးတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ထိုးထည့်တော့ သီရိခမျာမချိမဆန့်ခံစားရရှာသည်။ ဦးသူတော်ကတော့ သီရိ အော်လေသူကြမ်းလေဖြစ်ပြီး ခါးကိုကော့လိုက်ဆန့်လိုက်နဲ့ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်နေသည်။ သီရိရဲ့ပေါင်လေးနှစ်ခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘေးကိုဖြဲကားထားပြီး ပေါင်ကြားထဲမှာကျကျနနထိုင်ပြီး ဆောင့်နေသည်။ ဦးသူတော်အတန်ကြီးက တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း သားအိမ်ခေါင်းကိုသွားသွားထိနေသည်။ သီရိခမျာနာတာရော အောင့်တာရောဘာမှမသိတော့ပဲ၊ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ကာ ဒီဒုက္ခကနေမြန်မြန်လွတ်မြောက်သွားဖို့သာ www...။ ငါလုပ်ခိုင်းတာကို ကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးတဲ့ ဟာမ။ တွေ့မယ်။'' ဦးသူတော် ကာမဘီလူးစီးပြီး သီရိပေါင်ကြားလေးကို လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲကာ အဖုတ်လေးထဲကို သူ့အတန်ကြီးနဲ့ ထိုးထည့်သည်။ ပထမတစ်ခါလုပ်သွားတဲ့ သူဌေးရဲ့ သုက်ရည်တွေက သီရိအဖုတ်လေးထဲမှာရော.....၊ အဖုတ်အ၀င်ဝမှာရော ရွှဲရွှဲစိုနေလို့သာတော်သေးသည်။ ဦးသူတော်အတန်ကြီးက သီရိအဖုတ်လေးထဲကို မဆန့်မပြဲကြီးတိုးဝင်နေသည်။ ဦးသူတော် တစ်ယောက်သူ့ သူဌေးရဲ့ အရည်တွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ အဖုတ်လေးကို မရွှံမရှာထိုးထည့်သည်။ ဦးသူတော် သီရိအဖုတ်လေးထဲ တစ်ဝက်လောက်ဝင်နေတဲ့ အတန်ကြီးကို အဆုံးနားရောက်တဲ့အထိပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အားနဲ့ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ ''ဗြွတ်...com Page 16 .်Кီားး Aိ်К်Х် ''အော့.....mmpays...။ အား. '' သီရိ ပျို့ပြီးအန်ထွက်သည်။ ဦးသူတော် သီရိကိုဘယ်လိုမှ စုပ်ခိုင်းလို့မရ။ ''အေး.. ဒုတ်...
..။ '' ဦးသူတော်ဆီက ကောင်းလွန်းလို့ငြီးလိုက်တဲ့အသံကြီးထွက်ပေါ်လာသည်။ ဦးသူတော်အသံက သီရိအတွက်တော့ မသတီစရာကောင်းလှသည်။ ဦးသူတော်ကသာကောင်းတာ သူမအတွက်တော့ နာကျင်လွန်းလှသည့်ငရဲခန်းကြီးပင်ဖြစ်တော့သည်။ သီရိ သူမကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာ ပိကျလာတဲ့ ဦးသူတော်ရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ဘေးကိုတွန်းထုတ်ရင်း အမောဖြေနေမိသည်။ အမောဖြေရင်း သူမဘ၀ကိုသူမသေချာပြန်တွေးမိသည်။ သူမဘ၀လေးမသန့်ရှင်းတော့။ ဓနရှင်လူတန်းစားတွေရဲ့အလိုကျ ဖြည့်ဆည်းပေးရသော ဆင်းရဲသားလူတန်းစားဘ၀ကို စိတ်ပျက်နေမိသည်။ သူမကို စကားတစ်ခွန်းမှမပြောပဲ ဆက်ဆံချင်တိုင်းဆက်ဆံသွားတဲ့ သူဌေးကိုလည်းသူမအလွန်စိတ်နာမိသည်။ ပြန်ခါနီး သူဌေးနာမည်မေးမလို့တောင်မမေးလိုက်ရ။ သူမ ဘ၀ကအရမ်းဆိုးလွန်းလှသည်။ သူမရဲ့ အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကိုခူးဆွတ်သူရဲ့ နာမည်တောင်မသိရတဲ့ဘ၀။ www.mmpays.....်Кီားး Aိ်К်Х် ဆုတောင်းနေရသည်။ သီရိဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ပါ။ ဦးသူတော်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက တော်တော်နဲ့မပြီး။ မပြီးတဲ့အပြင် နေရာတောင်ပြောင်းလိုက်သေးသည်။ ဦးသူတော် သီရိပေါင်တွေကို ရင်ဘတ်နဲ့ထိတဲ့အထိ ကပ်ထားပြီး ကြွလာတဲ့ အဖုတ်လေးကို အပေါ်ကနေဖိဖိပြီးဆောင့်သည်။ တော်တော်ကြာအောင်ဆောင့်ပြီးတော့ ဦးသူတော် နှာမှုတ်သံတွေ တရှုးရှုးထွက်လာသည်။ ဦးသူတော်ပြီးတော့မည်။ သီရိရဲ့ပေါင်နှစ်ခေါင်းကို ဘေးကိုဖြဲချလိုက်ပြီးတော့ သီရိကိုယ်လုံးပေါ်တက်ဖိပြီး လှေကြီးထိုးပုံနဲ့နဲ့ အားရပါးရဆောင့်တော့သည်။ သီရိပေါင်ကြားထဲမှာ မီးပွင့်မတတ်ဆောင့်ပြီးတော့ ဦးသူတော် သုတ်ရည်တွေကို သီရိအဖုတ်လေးနဲ့အပြည့်ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ ''အား.။ ကောင်းလိုက်တာ ခလေးရယ်.com Page 17 .
.......com Page 18 . ။ စကပ်ချွတ်တာမြန်ပေလို့ပဲ နို့မို့ဆို ပုဆိုးနဲ့ပြန်ရလောက်တယ်။'' သီရိတစ်ယောက်ထဲခပ်တိုးတိုးညည်းရင်း အနားမှာတွေ့တဲ့ အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ကြယ်သီးပြုတ်နေတဲ့ အကျီနဲ့ ဘော်လီလေးကို ခေါက်ထည့်လိုက်သည်။ ''လာ..mmpays. သွားမယ်ကလေးလေး..။ ဦးသူတော်အမေးကြောင့် သီရိစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ချင်သော်လည်း စိတ်ကိုလျော့ကာ အိမ်လိပ်စာပြောပြလိုက်သည်။ သီရိနေတဲ့ ရပ်ကွက်က တိုးချဲ့ကွက်သစ်ဆိုတော့ လမ်းတွေက ကျဉ်းလွန်းလှသည်။ www...။'' ဦးသူတော်သီရိလက်တစ်ဖက်ကို ဆွေဲခ်ါပြီး ကားရှိရာကိုပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ သူဌေးရဲ့ အိမ်အောက်ထပ်က လူမိုက်နှစ်ယောက်ကသီရိဆင်းလာတာမြင်တော့ သီရိရဲ့ ရင်သားတွေကိုစိုက်ကြည့်နေကြသည်။ သီရိဝတ်ထားတဲ့ သူဌေးရဲ့ ရှပ်အကျီက ခပ်ပါးပါးမို့ ရှပ်အကျီအောက်မှာ သီရိရင်သားအစုံက ထင်းကနဲပေါ်နေမှာသေချာသည်။ သီရိရှက်စိတ်ကြောင့် မျက်နှာလေးနီရဲပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ကာ ကားထဲကိုခပ်သွက်သွက်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ''အိမ်ကိုပဲတန်းပြန်မှာမဟုတ်လား ကလေးလေး။ အိမ်လိပ်စာပြောပြ..။'' အိမ်ကိုတန်းမပြန်လို့ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အလုပ်လုပ်ရမှာလဲ.။'' ဦးသူတော် သီရိအနားတိုးကပ်လာရင်း သီရိနို့လေးတစ်လုံးကို ညှစ်ရင်းပြောသည်။ သီရိ တဏှာရူးကြီးသူတော်ရဲ့ လက်ကို ပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး အ၀တ်တွေကောက်ဝတ်ဖို့ ပြင်သည်။ သီရိ ရဲ့ ဘော်လီလေးက ဂျိတ်တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီး ၀တ်လို့မရတော့။ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူလေးကလည်း ကြယ်သီးတွေပြုတ်ထွက်သွားတာကြောင့် ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေပြီ။ သီရိအဖြစ်ကို ဦးသူတော်မြင်တော့ ဘီဒိုထဲက သူဌေးရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ထုတ်ပေးသည်။ သီရိ သူဌေးရဲ့ ရှပ်အကျီကို ၀တ်လိုက်ပြီး ကုတင်အောက်ပြုတ်ကျနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ စကပ်လေးကို ပြန်ကောက်ဝတ်လိုက်သည်။ ''ဟူး.်Кီားး Aိ်К်Х် ဦးသူတော်တစ်ယောက် မွေ့ယာအထူကြီးပေါ်မှာ ၀က်မှိန်းမှိန်းနေရာကနေ ကမန်းကတန်းထပြီး အ၀တ်တွေ ပြန်ကောက်ဝတ်သည်။ ''ပြန်ရအောင် ကလေးလေး......
်Кီားး Aိ်К်Х် ဦးသူတော်ကို သီရိအိမ်ရှေ့ထိလိုက်မပို့ခိုင်းချင်တာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားသည်။ ကားပေါ်ကဆင်းကာနီး..com Page 19 .... ''သီရိလေး ။ မနက်ဖြန်မနက်စောစောထလာပြီး ဦးရုံးခန်းထဲလာခဲ့နော်။ ဒီနေ့တွေ့ရတာမ၀သေးဘူး။ နောက်နေ့အားရပါးရချစ်ချင်သေးတယ်။'' သီရိ ဦးသူတော်ပြောတာကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ လှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ သီရိ လမ်းထိပ်ကနေပဲ အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့သည်။ လမ်းလျောက်ရင်း ဦးသူတော်ပြန်ခါနီးပြောသွားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်စဉ်းစားမိသည်။ ဒီလိုသာဆက်ပြီးသွားရင် ငါလည်း မကောင်းတဲ့မိန်းမလုံးလုံးဖြစ်တော့မယ်။ လက်ထဲမှာလည်း သူဌေးပေးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံသိန်းနှစ်ဆယ်ရှိသည်။ သီရိတို့လို ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားအတွက်ကတော့ ပိုက်ဆံသိန်းနှစ်ဆယ်သည် အရင်းအနှီးအများကြီးလုပ်လို့ရသည်။ ''တော်ပြီ...mmpays..။ ငါဓာတ်ဆီဆိုင်ကနေအလုပ်ထွက်လိုက်တော့မယ်။'' ဆုံးဖြတ်ချက်သေသေချာချာချလိုက်တော့မှပဲ လေးလံနေတဲ့သီရိရဲ့စိတ်တွေပေါ့ပါးသွားတော့သည်။ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သီရိရဲ့ အိမ်အပြန်ခြေလှမ်းတို့က သွက်လက်နေသည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက နာကျင်ကျိန်းစပ်မှုကြောင့် အနည်းငယ်ကွတတ ဖြစ်နေတာကို လူမမြင်အောင်ထိန်းလျှောက်ရတာတစ်ခုပဲရှိသည်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ဘယ်သူမှမရှိလို့တော်သေးသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေရင် သီရိမူမမှန်တာကို သိသွားလောက်သည်။ သီရိအ၀တ်အစားလဲပြီး သူဌေးရဲ့ ရှပ်အကျီကို အိမ်နောက်ဖေးမှာ မြေမြုပ်လိုက်သည်။ အညံ့အဆိုးတွေ တစ်ခါထဲ ပျောက်ပါစေလို့ လည်း ဆုတောင်းလိုက်သည်။ www..
...com Page 20 ..mmpays........။'' ''ဟို... ဟို........်Кီားး Aိ်К်Х် သူဌေးပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံသိန်းနှစ်ဆယ်ကိုတော့ အမေတွေ့သွားမှာစိုးလို့ သီရီအကျီသေတ္တာအောက်မှာဖွက်ထားလိုက်သည်။ သီရိ ရေမိုးချိုးပြီး အိမ်ထဲပြန်ရောက်တော့ သူဌေးဆုတ်ဖြဲလို့ ကြယ်သီးပြုတ်သွားတဲ့ အကျီလေးနဲ့ ဘော်လီလေးကိုပြန်ပြီး ချုပ်နေမိသည်။ အ၀တ်ချုပ်ရင်း အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ အသံကြားလို့ အခန်းအပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ အပြင်ကပြန်လာတဲ့ သီရိအမေ .. ဒီလိုပါပဲ သမီးရယ်။ အမေ ဟိုနားဒီနားလျောက်သွားတာပါ။'' ''ဟိုနားဒီနားသွားရင်ရေစိုပါ့မလားအမေရယ်။ မှန်မှန်ပြော...။ ဒီပိုက်ဆံနဲ့ အမေဈေးဖိုးလုပ်နော်။ နောက်ဆိုပင်ပင်ပန်းပန်းတွေမလုပ်နဲ့တော့။'' www..။'' ''အမေသူများအိမ်မှာအ၀တ်တွေသွားလျှော်ပြန်ပြီမဟုတ်လား။'' ''အမေ့ကျန်းမာရေးကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတာလည်းသိရဲ့သားနဲ့ အအေးမခံပါနဲ့ဆိုမှ။'' ''အို. မိခင်ကြီးကို စိုက်ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့သည်။ မိခင်ကြီးက အခုမှအသက်လေးဆယ်ကျော်ပဲရှိသေးသည်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဆင်းရဲခြင်းဒဏ်တွေကို ခံစားခဲ့ရလို့ လူက အဖွားကြီးအိုလေးနှယ်ဖြစ်နေသည်။ အဖေမသေခင်က တစ်ဖွဖွပြောခဲ့သလို သမီးတို့အမေက အရမ်းချောတာဆိုတာကိုပြန်ကြားယောင်မိသည်။ အမေ့ရဲ့ ချောမောတာတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအမေရယ်။ သီရိ အခန်းထဲကိုပြန်ပြီး သေတ္တာထဲက ပိုက်ဆံတစ်သိန်း ထုတ်ပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့သည်။ ''အမေရော့ . သမီးရယ်။ အမေနေကောင်းပါတယ်။ အပိုဝင်ငွေလေးရအောင်လို့ ခဏတစ်ဖြုတ်ပါ။'' သီရိ .....။ ''အမေ...။ ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ။ အ၀တ်အစားမှာလည်း ရေတွေစိုလို့.....
mmpays..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိကမ်းပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မယူသေးပဲ သီရိကို မယုံသင်္ကာနဲ့ကြည့်သည်။ သမီး ဒီပိုက်ဆံတွေဘယ်ကရလာတာလဲ။ မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့နော်။ အမေတို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ အမေ့အသက်သေချင်သေသွားပစေ။ ငါ့သမီးကိုတော့ မငတ်အောင်အမေရှာကျွေးနိုင်တယ်။ ''အမေရယ်.com Page 21 ....... ''အမေ.. ဒါက သမီး ဓာတ်ဆီဆိုင်ကနေအလုပ်ထွက်ခဲ့လို့ရတဲ့ နစ်နာကြေးပါအမေရဲ့။ ဓာတ်ဆီဆိုင်က ပိုင်ရှင်အသစ်ကို လွဲပေးမယ်ဆိုပြီး သမီးတို့အလုပ်သမားတစ်ယောက်စီကို နစ်နာကြေးပေးပြီး အလုပ်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်လေ။ နောက်လာမဲ့ပိုင်ရှင်အသစ်က သူ့ကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတွေပါလာမှာဆိုတော့ သမီးတို့ကို မလိုဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။'' သီရိ ...။'' သီရိ ဘာမှမပြောပဲ မိခင်ကြီးကို အတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ တအောင့်လောက်ကြာမှ စီးကျနေတဲ့မျက်ရည်စက်တွေကို လက်နဲ့ အသာသုတ်ရင်း.. မိခင်ကြီးဖြစ်သူယုံကြည်လာအောင် အတန်ကြာလှည့်ပတ်ပြီးပြောတော့မှ သီရိလက်ထဲက ပိုက်ဆံတစ်သိန်းကိုယူသည်။ ''ဒီပိုက်ဆံနဲ့ အမေဆေးကုနော်။ သမီးက နောက်အလုပ်ထပ်ရှာလို့ရရင် ဘာမှပူစရာမလိုဘူးသိလား။'' ''အေးပါသမီးရယ်။ အမေလည်းနေကောင်းမှ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ။ အမေဆေးကုပါ့မယ်။'' သီရိ ဆီဆိုင်ကထွက်ပြီး သုံးရက်လောက်မိခင်ဖြစ်သူကို ဆေးခန်းလိုက်ပြပေးပြီး ၊ အိမ်မှာပဲနေဖြစ်သည်။ တစ်ရက် မြို့ထဲသွားရင်း အမျိုးသမီးအရောင်းဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာလေးတစ်ခု www.
com Page 22 ..။ ဟုတ်ပြီလား။'' www.mmpays.....။ အရက်ဆိုင်တွေမှာ အရက်ကုမ္ပဏီဝတ်စုံဝတ်ပြီး စားပွဲလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ အရက်ပုလင်းလေးတွေဘေးနားမှာချပြီး မတ်တပ်ရပ်ပေးနေရုံပဲ။ ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့သူတွေကို သီရိရောင်းတဲ့ တံဆိပ် မှာ မလားမေးရုံပဲ။ ( ကိုဂျင်ရေးတဲ့ ၀င်ကစွပ်ထဲက ကြည်မာ ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါရန်.်Кီားး Aိ်К်Х် ကပ်ထားတာတွေ့တော့ ၀င်စုံစမ်းကြည့်သည်။ အလုပ်က ညနေငါးနာရီကနေ ညရှစ်နာရီအထိလုပ်ရမည်။ အ၀တ်အစားပေးမည်။ ကားနဲ့ အကြိုအပို့လုပ်ပေးမည်လို့လည်းသိရသည်။ သီရိလုပ်ရမဲ့အလုပ်က အရောင်းမြင့်တင်ရေး.၀င်ကစွပ် စာမျက်နှာ ၃၄၉ကိုရှု) လစာကိုမေးကြည့်တော့ တစ်လ တစ်သိန်းလောက်ရမယ်လို့ပြောသည်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကပိုပြီးရောင်းရလို့ amount ပြည့်ရင် အပိုဆုကြေးလည်းပိုရမည်။ အလုပ်ချိန်ကလည်း ညနေပိုင်းမှဆိုတော့ နေ့ခင်းဘက်တစ်ခုခုလုပ်လို့ရမည်။ အရက်ကုမ္ပဏီဆိုပေမဲ့ ရုံးခွဲမို့လို့ ယောက်ျားလေးနည်းပြီး မိန်းကလေးတွေပိုများသည်။ သီရိစုံစမ်းတဲ့ စာရေးမကောင်မလေးက အထဲဝင်ပြီး မန်နေဂျာနဲ့ ၀င်တွေ့လိုက်ပါဆိုတော့ မန်နေဂျာနဲ့ဝင်တွေ့ရသည်။ မန်နေဂျာက သီရိထင်ထားသလို ယောက်ျားလေးမဟုတ်ပဲ အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ မန်နေဂျာမမက သီရိကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း ပြုံးသည်။ '' ညီမလေး ရုပ်ရည်နဲ့ဆိုရင် ပိုတောင်ပိုပါသေးတယ်ကွယ်။ မနက်ဖြန်ကနေစပြီးအလုပ်စဆင်းပေါ့။ ညီမလေးအိမ်လိပ်စာပေးထား။ မနက်ဖြန်ညနေလေးနာရီခွဲလောက် ကုမ္ပဏီကကားနဲ့ လာကြိုလိမ့်မယ်။ ရှေ့က ကောင်မလေးဆီကနေ အ၀တ်အစားသုံးစုံထုတ်သွား..
...com Page 23 ...။ www....်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ ရုံးစာရေးမလေးဆီကနေ အကျီအ၀တ်အစားသုံးစုံထုတ်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ သီရိ အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့ အပြုံးလေးတွေပါတွဲလွဲခိုနေသည်။ သူမအလုပ်ရတော့မယ်မဟုတ်ပါလား။ သီရိ သူမအမေကို အလုပ်ရကြောင်းပြောတော့ အရက်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုတော့ အဆင်ပြေပါ့မလားပြောသည်။ သူမကလည်း အိမ်ကိုအပို့အကြိုလာလုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိကြောင်း တော်တော်လေးရှင်းပြလိုက်ရသည်။ သီရိ အလုပ်လုပ်တာ ဆယ့်ငါးရက်လောက်ရှိပြီ။ အလုပ်က ညနေပိုင်းမှလုပ်ရတာမို့ တစ်နေကုန် မိခင်ကြီးနားမှာနေပြီး အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ပေးလို့ရသည်။ သီရိ ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင်သူဌေးဆီကနေ သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးရလာတဲ့ပိုက်ဆံ ဆယ့်ကိုးသိန်းလောက်ရှိသေးသည်။ ဒီပိုက်ဆံတွေကိုမိခင်ကြီးယူအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။ အိမ်ဈေးဖိုးလေးလည်းရအောင် ကုန်စုံရောင်းတဲ့ အိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက်ထောင်ချင်သည်။ သီရိ ခေါင်းထဲမှာ အကြံတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ''ဟုတ်ပြီ....။ ဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်။'' လကုန်ပြီး တစ်ရက်နေ့..mmpays..။ အောင်ဘာလေထီ ဖွင့်တဲ့နေ့။ သီရိ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆိုင်က မျက်မှန်းတန်းမိနေပြီးသား အကူကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သီရိဆယ့်ငါးသိန်းဆုပေါက်တယ်ဆိုပြီး လာအကြောင်းကြားခိုင်းသည်။ ထီလက်မှတ်ရှိလားဆိုတော့ သီရိက အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ထီလက်မှတ်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြပြီး ဆုငွေထုတ်သလိုလိုနဲ့ အပြင်ကိုလိုက်လာခဲ့သည်။ သီရိကိုင်သွားတဲ့ အိတ်ထဲမှာ တစ်သောင်းတန် ဆယ်ငါးသိန်းအုပ်ကပါသွားပြီးသား...
.....။ သီရိ အခုအချိန်ထိ ဘယ်ယောက်ျားလေးကိုမှ မကြိုက်ခဲ့ပဲ ကိုကြီးတစ်ယောက်ထဲကိုပဲစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကိုကြီးနဲ့ စတွေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်ကို ပြန်ပြီးသတိရမိသည်။ သီရိဆယ်တန်းတက်တုန်းကပေါ့။ ကျောင်းမုန့်စားဆင်းချိန် ကျောင်းရှေ့မှာ လှည်းလေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ရေခဲခြစ်သည်ကြီးရှိသည်။ သီရိ ရေခဲခြစ်သွားဝယ်တဲ့အချိန်က ကျောင်းတက်ခါနီးမို့ ကျောင်းရှေ့မှာလူရှင်းနေသည်။ ရေခဲခြစ်သည်ကြီးဆီမှာလည်းဝယ်တဲ့လူ သုံးလေးယောက်လောက်ရှိသည်။ သီရိလည်းရေခဲသုတ်ရောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးရေခဲတွေကို ခြစ်နဲ့ ချစ်နေတာကို ဘာမှမပြောပဲ ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ သူမအလှည့်မှမရောက်သေးတာကို။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပြိုင်ကားအနီလေးတစ်စီးက ရေခဲသုတ်ရောင်းတဲ့ လှည်းရဲ့ဘေးနားမှာလာရပ်ပြီး အရပ်မြင့်မြင့် ရုပ်ချောချောအကိုတစ်ယောက် ဆင်းလာပြီး www.။ အမေကလဲ '' သီရိ ရှက်သလိုနဲ့ မျက်နှာလေးငုံ့သွားမိသည်။ မျက်လုံးထဲမှာလည်း အမြဲတန်း စိတ်ထဲမှာ တိတ်တခိုးစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ ကိုကြီးရဲ့မျက်နှာချောချောကပေါ်လာသည်။ ကိုကြီး..com Page 24 ..။ သမီးဆီမှာ ချစ်သူမရှိသေးဘူးလား။'' ''အို...........mmpays.်Кီားး Aိ်К်Х် ရိုးသားတဲ့ သီရိရဲ့ မိခင်ကြီးကတော့ ဘာမှမသိလိုက်..။ သမီးလေးကံကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး ပျော်နေသည်။ သီရိလည်း ငွေကို အရင်းအနှီးမပျောက်အောင်ဆိုပြီး ဆိုင်ရှေ့မှာ အဖီလေးထိုးပြီးကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်သည်။ မနက်ပိုင်းကနေ ညနေပိုင်းအထိ သီရိ ဈေးဆိုင်ထိုင်သလို သီရိအလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်း အမေနဲ့မောင်လေးက တစ်လှည့်စီရောင်းကြသည်။ သူတို့ရပ်ကွက်လေးထဲမှာ ဈေးဆိုင်ကလည်းသိပ်မရှိတာရော၊ သီရိကလည်းအပြောအဆိုချိုသာပြီး ဈေးဝယ်တွေကို ရည်ရည်မွန်မွန်ဆက်ဆံတာကြောင့် သီရိရဲ့ ဈေးဆိုင်လေးလည်း အတော်လေးအဆင်ပြေသည်ဟုပြောရမည်။ ဒီလိုနဲ့ ခြောက်လလောက်ကြာတော့ မိခင်ဖြစ်သူက သီရိကိုခေါ်ပြီးမေးသည်။ ''သမီး....
.mmpays.... တစ်ရာတန်ဦးလေး.. လက်ထဲမှာကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ထားတဲ့ တစ်ရာတန်အနွမ်းလေးတစ်ရွက်ကို ငုံ့ကြည့်မိသည်။ ''သမီးလေး ဘယ်လောက်တန်ယူမလဲ။'' ရေခဲသုတ်သည်ဦးလေးကြီးရဲ့ အမေးကြောင့် သီရိ ကပျာကယာမော့ကြည့်ပြီး...်Кီားး Aိ်К်Х် ဘာမှမပြောသေးပဲ ရေခဲသုတ်သည်ကြီးရေခဲတွေထိုင်ခြစ်တာကိုရပ်ကြည့်နေသည်။ အရင်လာဝယ်တဲ့သူတွေကို ငါးရာတန်၊ သုံးရာတန် ၊ တစ်ရာတန် အသီးသီး ရောင်းသည်။ ငါးရာတန်ရေခဲသုတ်က စပျစ်သီးခြောက်တွေလည်းပါသည်။ ဖရုံယို ၊ နာနတ်ယိုတွေလည်းပါသည်။ ပြီးတွေခွက်ကြီးကလည်းအကြီးကြီး။ တစ်ရာတန်ကတော့ ရေခဲပေါ်မှာ ဖျော်ရည်အရောင်နှစ်မျိုးလောက်ဆမ်းပေးပြီး နို့ဆီကို ဇွန်းသေးသေးလေးနဲ့ တစ်ဇွန်းပဲဆမ်းပေးတာတွေ့သည်။ သီရိ .. ကျွန်တော့်ကို ရေခဲသုတ်ငါးရာတန်တစ်ခွက် ၊ ပြီးတော့ ဟိုကောင်မလေးကိုလည်း ငါးရာတန်ပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ပဲ ပေးပါ့မယ်။'' ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ရင်း တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ''ရတယ်ဦးလေး ပြန်မအမ်းနဲ့တော့။ ဦးပဲယူထားလိုက်ပါ။'' ဈေးသည်ကြီးက ပထမလုပ်လို့ပြီးတဲ့ရေခြစ်ကို ပြိုင်ကားနဲ့ကိုကြီးကိုကမ်းပေးသည်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ.။'' ရေခဲသုတ်သည်ဦးလေးကြီးကို တစ်ရာတန်အနွမ်းလေးတစ်ရွက်ကိုကမ်းပေးရင်းပြောလိုက်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပြိုင်ကားနဲ့ကိုကြီးဆီက စကားသံကထွက်လာသည်။ '' ဦးလေး... '' တစ်.....com Page 25 . ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံကိုကြားရသည်။ www...
.။ ဟုတ်ပြီလားကလေးလေး။'' သီရိဆံပင်လေးတွေကို ခပ်သာသာပွတ်ရင်းပြောသည်။ သီရိလည်း ရင်တွေတုန်လာတာနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ပဲ အတန်းထဲကိုအပြေးတစ်ပိုင်းပြန်ပြေးဝင်ခဲ့သည်။ သီရိဘ၀မှာ ကိုကြီးဝယ်ကျွေးတဲ့ရေခဲသုတ်က စားလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ နတ်သုဒ္ဓါနဲ့တောင်မလဲနိုင်လောက်အောင်ပဲ စိတ်ထဲမှာထင်မိသည်။ ဒီလိုနဲ့ သီရိဆယ်တန်းကို တစ်နှစ်ကျပြီး အိမ်ကဆက်မထားတော့တာနဲ့ ဆီဆိုင်မှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်လေ သွားရင်းလာရင်းလမ်းမှာ ပြိုင်ကားအနီလေးနဲ့ကိုကြီးကိုတွေ့မိသည်။ ဆီဆိုင်မှာ ဆီထည့်ရင်း ကိုကြီးများဆီလာထည့်မလားဆိုပြီး မျှော်မိသေးသည်။ ကိုကြီးကသီရိတို့ ဆိုင်မှာဆီထည့်လေ့မရှိဘူးထင်သည်။ သီရိအလုပ်လုပ်တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာတစ်ခါမှ ကိုကြီးနဲ့မဆုံဖြစ်ခဲ့။ လမ်းမှာတော့ကိုကြီးကို ပြိုင်ကားလေးမောင်းမောင်းသွားတာမကြာခဏတွေ့ဖူးခဲ့သည်။ ''သမီး..။ ကျောင်းတက်နေပြီ။ ဆရာမဆူနေလိမ့်မယ်သွားတော့။'' သီရိ ရေခဲခြစ်ခွက်လေးကိုကိုင်ရင်း ခန့်ညားပြီးမင်းသားတစ်ယောက်လိုချောနေတဲ့ကိုကြီးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်တွေ့နဲ့ တွေတွေလေးကြည့်နေမိသည်။ ''သွားတော့......။'' www.။ စာတွေအများကြီးသင်ခဲ့.. ကလေးလေး..mmpays..။'' မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်မရှည်သလို မေးသံကြောင့် သီရိရဲ့အတွေးတွေပြတ်တောက်သွားသည်။ ''မ...်Кီားး Aိ်К်Х် ကိုကြီး ရေခဲသုတ်ကို စားမလို့လုပ်နေရာကနေ မစားတော့ပဲ သီရိဆီကို လှမ်းပေးသည်။ ''ရော့....com Page 26 .. ။ အမေမေးနေတယ်လေ။ ချစ်သူရှိနေပြီလားလို့...... မရှိပါဘူး အမေ..
com Page 27 ... အမေကလည်း။ ကိုယ်နဲ့သိတာမှမဟုတ်တာ။ လူဆိုးမှန်းမသိ ၊ လူကောင်းမှန်းမသိ။'' ''ကောင်လေးကလူရိုးလေးပါသမီးရယ်။ အရက်မသောက်ဆေးလိပ်မသောက်ကွမ်းမစား၊ သူ့မိဘတွေကလည်းသေသွားပြီ။ မြို့ထဲက ဘဏ်မှာလုံခြုံရေးအစောင့်လုပ်နေတာ။'' ''စိတ်ကူးမလွဲနဲ့သမီး။ ခုချိန်မှာ သမီးကို လင်ကောင်းသားကောင်းနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်လေးအမေမြင်ချင်တယ်။''' ''ကြားလား။ အမေ..... ဟုတ်ကဲ့ပါ အမေ။'' ဒီလိုနဲ့ပဲ သီရိတစ်ယောက် ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းလေး မတ်ဟဲထူးနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်သည်။ မတ်ဟဲထူးက ကရင်လူမျိုး ။ ကရင်လူမျိုးဆိုပေမဲ့ သီရိတွေဖူးတဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေလိုမျိုး ဂင်တိုတိုတောင့်တောင့်မဟုတ်။ အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့ ဗလံလေး။ သီရိ မတ်ဟဲထူးကိုပထမဆုံးစတွေ့တော့ ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ ဘဏ်လုံခြုံရေးဖြစ်နေတာကိုတောင် စဉ်းစားလို့မရ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်တာမရှိလို့တော်သေးသည်။ သူမယောက်ျားစောင့်တဲ့ဘဏ်ကိုသာတိုက်လို့တော့ တော်တော်လွယ်မှာပဲလို့တွေးပြီးရယ်မိသေးသည်။ မတ်ဟဲထူးနဲ့ မင်္ဂလာဦးညတွေ့ကြုံရမဲ့အရေးကိုတွေးပြီး သီရိရင်လေးခဲ့သေးသည်။ သီရိကအပျိုမဟုတ်တော့လို့။ www..မနက်ဖြန် အမေ့သူငယ်ချင်းလာရင် သူစီစဉ်တဲ့အတိုင်း သူ့တူနဲ့ သမီးကိုနေရာချထားပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား။'' ''ဟုတ်.mmpays..်Кီားး Aိ်К်Х် ''အေး။ မရှိရင်လည်းပြီးတာပဲ။ သမီးအသက်လည်းမငယ်တော့ဘူး။ အိမ်မှာ အားကိုးအားထားယောက်ျားသားလိုတယ်ကွယ်။ မနေ့ကပဲ အမေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့တူလေးတစ်ယောက် နဲ့ သမီးကို လက်ထပ်ပေးဖို့ လာပြီးပြောသွားတယ်။'' ''အို.
..mmpays........................... www...........................com Page 28 ....... မင်္ဂလာဦးညက မတ်ဟဲထူးကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ဘက်ချလာနိုက်ဆိုပြီး အရက်လိုက်တိုက်ခိုင်းသည်။ အရက်တိုက်ခိုင်းရင်း မတ်ဟဲထူးကိုလည်း အတင်းဇွတ်သောက်ခိုင်းသည်။ မတ်ဟဲထူးက မသောက်တတ်လို့မသောက်ချင်ဘူးဆိုတော့လဲမရဘူး။ သူမသောက်ရင် ပြန်မလွှတ်ဘူးဆိုပြီး အတင်းဆွဲထားကြသည်။ မတ်ဟဲထူးလည်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ဇနီးလေးနဲ့ အရမ်းကိုအိပ်ချင်နေတာနဲ့ သူတို့တိုက်တဲ့ အရက်ကို နှာခေါင်းပိတ်ပြီးမော့သောက်လိုက်သည်။ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခက်ွတိုက်တာ သုံးခွက်မြောက်တော့ မတ်ဟဲထူးတော်တော်လေးမူးနေပြီ။ ဒါတောင် မတ်ဟဲထူးကို နောက်ထပ် အရက်ထပ်တိုက်သေးသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီကောင် မူးပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ သတို့သမီးလေးငိုနေမယ် ဆိုပြီး တားလို့ ကံကောင်းသွားတာ။ နို့မို့ဆိုရင်တော့ အိမ်တောင်ပြန်ရောက်မည်မထင်ပေ။ မတ်ဟဲထူးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ တစ်အိမ်သားလုံးအိပ်ကုန်ပြီ။ စိထားတဲ့ အိမ်တံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်ရင်း သီရိအခန်းထဲဝင်ခဲ့သည်။ သူ့မိန်းမသီရိက ကုတင်စောင်းမှာ အောက်ကိုခြေဆင်းထိုင်ရင်းသူ့ကို စောင့်နေသည်။ မတ်ဟဲထူး မျက်လုံးထဲမှာ အရမ်းလှနေတဲ့ ဇနီးလေးသီရိကို ဖက်ပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်တာပဲမှတ်မိလိုက်သည်။ နောက်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာမမှတ်မိတော့။ .........်Кီားး Aိ်К်Х် အပျိုစင်အမှေးပါးလေးမရှိတော့လို့။ ..........
.mmpays...com Page 29 .။ အိမ်ရှေ့က အသံကြားရသည်။ ခြေသံတစ်ဖျတ်ဖျတ်ကြားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ မတ်ဟထဲူးကိုတွေ့သည်။ မတ်ဟဲထူးပုံစံက ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ ။ ဖြေးဖြေးချင်းသီရိအနားကပ်လာသည်။ အနားကပ်လာမှ မတ်ဟဲထူးဆီက အရက်နဲ့တထောင်းထောင်းရနေသည်။ သီရိက အရက်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုတော့ အရက်သမားတွေကို နေ့တိုင်းတွေ့ရသည်။ ဒီအရက်နံ့ကြီးကိုသီရိ အမုန်းဆုံးပဲ။ မတ်ဟဲထူး သီရိအနားကိုကပ်လာပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲချပစ်သည်။ သီရိကုတင်ပေါ်မှောက်ကျသွားတော့ မတ်ဟဲထူးက သီရိကိုယ်လုံးပေါ်ခွတက်ပြီး သီရိနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားသည်။ မတ်ဟဲထူးဆီက အရက်နံ့တွေရနေတာနဲ့ သီရိခေါင်းကိုဘယ်ညာယိမ်းရင်း မတ်ဟဲထူးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ မထိအောင်ရှောင်သည်။ မတ်ဟဲထူးကတော့ မူးမူးနဲ့ သီရိ နားရွက်တွေရော၊ ပါးတွေရော၊ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးနဲ့ နားသယ်စပ်တွေကို တပြွတ်ပြွတ်နမ်းတော့သည်။ သီရိထမိန်လေးကတော့ မတ်ဟဲထူးတက်ဖိတာနဲ့ ပေါင်လည်လောက်ထိကျွတ်နေပြီ။ www. သီရီ ကုတင်စောင်းလေးမှာ ခြေဆင်းထိုင်ရင်းယောက်ျားဖြစ်သူပြန်လာမဲ့ အချိန်ကို စောင့်နေမိသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တော်တော်နဲ့ ပြန်မလွှတ်ကြသေးဘူး။ သီရိ ယောက်ျားဖြစ်သူကိုစောင့်ရင်း အဖုတ်လေးထဲက အရည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာသည်။ ပေါင်ကြားထဲမှာ စိုစိစိလေးဖြစ်လာသည်။ မကြာခင် ကာမစပ်ရှက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက သီရိ ကို အတွေ့အကြုံတစ်ခါမှ မရှိဖူးသေးတဲ့ အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်လိုရင်ခုန်စေသည်။ သီရိအဖုတ်လေးထဲကို ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်ရောက်လာရင် သူ့အတန်ကြီးနဲ့ထိုးမည်ဆိုတာကို တွေးပြီးရင်တွေတုန်နေသည်။ ကျွိ...်Кီားး Aိ်К်Х် မင်္ဂလာဦးညက.
''သီရိခပ်တိုးတိုးလေးညည်းရင်း မတ်ဟဲထူးရဲ့ ကျောပြင်ကို ဖက်ထားမိသည်။ မတ်ဟဲထူးကတော့ မူးမူးနဲ့ အပေါ်ကနေ ဖိဖိပြီးဆောင့်ချနေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက်သားအိမ်ခေါင်းကို သွားသွားဆောင့်မိလို့ သီရိ အောင့်သလိုလိုခံစားရသည်။ www. ''ကနဲမြည်သံလေးပေါ်လာပြီး ပေါင်လေးကားသွားသည်။ မတ်ဟဲထူးကတော့ မူးမူးနဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားကိုပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်နေသည်။ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း သီရိ အစိလေးကို ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားသလို ဖြစ်နေတော့ သီရိ စိတ်တွေပိုပြီး ထကြွလာသည်။ မတ်ဟဲထူးကိုယ်လုံးနဲ့ အပေါ်ကတက်ဖိထားတာကြောင့် လက်နဲ့ကိုင်ပြီးသွင်းလိုက်လို့လဲ မလွယ်ဘူးဖြစ်နေသည်။ သီရိ မတ်ဟဲထူးရဲ့ အတန်ကြီးအဖုတ်လေးထဲဝင်လာအောင် အဖုတ်လေးကိုကော့ကောင့်တင်ပေးနေမိသည်။ သီရိအဖုတ်ကလေးက ထွက်တဲ့အရည်တွေကလည်း ရွှဲရွှဲစိုနေပြီ။ မတ်ဟဲထူးရဲ့လီးတန်ကြီးလည်း သီရိအဖုတ်က ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့ လူးပြီး ပြောင်ချောနေပြီ။ သီရိပေါင်ကိုအစွမ်းကုန်ကားရင်း အပေါ်ကနေမူးမူးနဲ့ ဆောင့်နေတဲ့ မတ်ဟဲထူးလီးတန်ကြီး အဖုတ်လေးထဲဝင်လာအောင် လုပ်နေသည်။ တစ်ချက် မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးက သီရိအဖုတ်လေးထဲကို စွပ်ကနဲဝင်လာသည်။ သီရိအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက အတန်ကြီးနဲ့ အတူ အထဲကိုလိပ်ပြီးဝင်သွားသည်။ သီရိဆီက ထွက်တဲ့အရည်ကြည်တွေကြောင့် အ၀င်မခက်ပဲ မတ်ဟဲထူးရဲ့ လိင်တန်ကပေးတဲ့အရသာကို ထိထိမိမိခံစားရသည်။ '' အ....com Page 30 .။ ကျွတ်....်Кီားး Aိ်К်Х် မတ်ဟဲထူးလက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်ပြီး ဖြောင်းကနဲထွက်လာတဲ့ သူ့အတန်ကြီးကို သီရိပေါင်ကြားထဲထိုးထည့်သည်။ မတ်ဟဲထူးမူးနေတာကြောင့်ရော၊ သီရိကပေါင်ကို သေချာမကားပဲစိထားတာကြောင့်ရော မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးက အဖုတ်ထဲမ၀င်ပဲ သီရိပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲဝင်လာသည်။ မတ်ဟဲထူးရဲ့အတန်နဲ့ သီရိရဲ့ အစိလေးကို ထိထိမိမိတစ်ချက်ပွတ်ဆွဲသွားတော့ သီရိ ဆီက '' အ...mmpays..
...။ '' ခံလို့ကောင်းနေရာကနေ ရုတ်တရက်ရပ်သွားတော့ သီရိ ရင်ထဲမှာဟာသွားပြီး အားမလိုအားမရလေးငြီးမိသည်။ သီရိအဖုတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးကို သီရိအဖုတ်အတွင်းသားနံရံလေးတွေနဲ့ ညှစ်ပေးသည်။ ''မတ်.'' မတ်ဟဲထူးပါးကို ခပ်သာသာလေးပုတ်ရင်း ခေါ်ကြည့်တော့ထူးသံမကြား။ မတ်ဟဲထူးမူးပြီးမှောက်သွားပြီ။ သီရိ စိတ်မရှည်သလိုနဲ့ မတ်ဟဲထူးကိုယ်လုံးကို ဘေးကိုအသာတွန်းချပြီး ထလိုက်တော့ မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးက အဖုတ်လေးထဲက ကျွတ်ထွက်သွားသည်။ သီရိ ရင်ထဲမှာဟာသွားသလိုပဲ။ သီရိ ရင်ထဲမှာ ကာမမီးတွေတောက်လောင်နေပြီ။ ပက်လက်ကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ မတ်ဟဲထူးပေါင်ကြားမှာ အတန်ကြီးက ထောင်ပြီး တယမ်းယမ်းဖြစ်သည်။ သီရိ မတ်ဟဲထူးဘေးမှာ ပေါင်ကြားထဲမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး အရည်တွေနဲ့ ရွှဲပြီးစိုလက်နေတဲ့ အတန်ကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်မိသည်။ မတ်ဟဲထူးအတန်က သီရိအရင်တွေ့ဖူးတဲ့ နှစ်ယောက်လို မဟားဒယားကြီးမဟုတ်ဘူး။ www. မတ်..com Page 31 ..mmpays..်Кီားး Aိ်К်Х် အ၀င် မနက်အောင် တင်ပါးကို အောက်ဖက်ကို ကော့လိုက်တော့ မတ်ဟဲထူးအတန်က အဖုတ်အတွင်းနံရံတွေကို ဟိုထိုးဒီထိုးဖြစ်ပြီး ပိုပြီးတော့ခံလို့ကောင်းသည်။ အဲဒါနဲ့ သီရိလည်း တင်ပါးကို ဘယ်ညာယိမ်းရင်း မတ်ဟဲထူးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကို အောက်ကနေခံနေမိသည်။ မတ်ဟဲထူးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သီရိအဖုတ်လေးထဲမှာ တစ်ချက်ထက်တစ်ချက်ပိုပြီး ခံလို့ကောင်းလာသည်။ သီရိ အသံထွက်မှာစိုးလို့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ရင်း မတ်ဟဲထူးဆောင့်တာကို ခံနေသည်။ ခဏနေတော့ မတ်ဟဲထူးရဲ့ ကိုယ်လုံးက သီရိအပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာသည်။ အတန်ကြီးကတော့ သီရိအဖုတ်လေးထဲမှာ ထည့်ရက်တန်းလန်း..။ ''အာကွာ........
...com Page 32 .။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိလက်နဲ့ အရင်းကဆုပ်ပြီးကိုင်လိုက်ရင် ထိပ်ဖူးနီနီရဲရဲက အပြင်ကိုထွက်နေသည်။ သီရိ မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးကိုကြည့်ရင်းစိတ်တွေကြွလာတာနဲ့ မတ်ဟဲထူးအတန်ပေါ်ကို အဖုတ်လေးနဲ့ တေ့ပြီး ခွထိုင်လိုက်သည်။ သီရိ တင်ပါးလေးကို နိမ့်ကာမြင့်ကာနဲ့ လီးကို အဖုတ်ထဲဝင်အောင် တစ်ရစ်ချင်းသွင်းသည်။ အရည်တွေ ရွှဲနေတာကြောင့် မတ်ဟဲထူးလီးတန်က သီရိအဖုတ်လေးထဲကို ရှောရှောရှုရှုပဲဝင်သွားသည်။ သီရိ မတ်ဟဲထူးရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ထောက်ပြီး ကိုယ်လုံးလေးကို ကြွကြွပြီးဆောင့်သည်။ ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်း အရှိန်လွန်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို တစ်ချက်တစ်ချက်သွားသွားထိလို့ ကိုယ်ကိုအမြန်ဖော့လိုက်ရသေးသည်။ သီရိ မျက်လုံးလေးမှေးပြီး မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးကပေးတဲ့ အရသာကို ခံစားနေသည်။ ကိုယ်လုံးလေးကို တွန့်တွန့်ပြီးတော့လည်း မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးပေါ်မှာ စကောဝိုင်းမွှေ့မွှေ့ပြီးဆောင့်သည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ သီရိ အဖုတ်လေးထဲက အရမ်းကောင်းလာတာနဲ့ တဖုန်းဖုန်းမြည်အောင် ဆောင့်လိုက်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးပေါ့သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ '' အား..။ '' သီရိ မတ်ဟဲထူးကိုယ်လုံးပေါ်ကိုမှောက်ချလိုက်ပြီး မတ်ဟဲထူးရဲ့ အရက်နံ့ထွက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို မွတ်သိပ်စွာနမ်းလိုက်သည်။ သီရိဖင်ကတော့ မတ်ဟဲထူးပေါင်ကြားထဲမှာ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တုန်း.mmpays...... မတ်ရယ်..။ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကလည်း မတ်ဟဲထူး အတန်ကြီးကို တရွရွှညှစ်နေကြသည်။ သီရိ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို အိပ်မောကျနေတဲ့ မတ်ဟဲထူးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်း မတ်ဟဲထူးကိုစွဲလမ်းသွားသလိုခံစားရသည်။ ကိုယ့်ယောက်ျားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်ကြောင့်လား။ သီရိအဖုတ်ထဲဝင်နေတဲ့ အချောင်းဆီကပေးတဲ့အရသာကြောင့်လားဆိုတာတော့ သီရိဝေခွဲလို့မရ..
.။ ကောင်းလိုက်တာ မတ်ရယ်.com Page 33 .။'' သီရိ ခပ်တိုးတိုးလေးညည်းရင်း မတ်ဟဲထူးကိုယ်လုံးပေါ်မှာအိပ်ရင်းအမောဖြေလိုက်သည်။ တအောင့်လောက်ကြာလို့အမောပြေတော့မှ သီရိမတ်ဟဲထူးကိုယ်ပေါ်ကနေလှိမ့်ပြီးဆင်းလိုက်သည်။ သီရိ အ၀တ်တစ်ခုနဲ့ နှစ်ယောက်လုံးမှာပေပွနေတာတွေရှင်းလင်းပြီးတော့ မတ်ဟဲထူးကို အ၀တ်အစားသေချာပြန်ဝတ်ပေးပြီး အိပ်ယာဝင်လိုက်သည်။ ' ဒီလိုကျတော့လည်း ယောက်ျားယူရတာ တော်တော်ကောင်းတာပဲ။ ' သီရိ အိပ်မပျော်ခင် တွေးဖြစ်အောင်တွေးမိလိုက်သေးသည်။ မနက်ကျတော့ကိုယ်တော်ချောကနေမြင့်မှနိုးလာသည်။ အမေတို့က စောစောထဲက ထမင်းစားပြီးသွားတာနဲ့ ကိုယ်တော်ချောကို တစ်ယောက်ထဲထမင်းပြင်ကျွေးလိုက်သည်။ ထမင်းစားရင်း မတ်ဟဲထူးက အားနာသလိုကြည့်ရင်းပြောသည်။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ မတ်ဟဲထူးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်းစိတ်တွေ ပြန်ကြွလာတာနဲ့ မတ်ဟဲထူးနှုတ်ခမ်းကို အားရပါးရနမ်းရင်း အောက်ကလည်း ပြန်ပြီးဆောင့်နေသည်။ ဆီးခုံချင်းထိတဲ့အသံတစ်ဖန်းဖန်းက အခန်းလေးထဲမှာ ခပ်မှန်မှန်ထွက်နေသည်။ သီရိခေါင်းလေးကိုဘယ်ညာရမ်းပြီး အားရပါးရဆောင့်ချနေသည်။ အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးတော့ မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးဆတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး ပူပူနွေးနွေးအရည်တွေသီရိ အဖုတ်လေးထဲ ဒလဟောဝင်လာသည်။ သီရိ တစ်ကိုယ်လုံး ကျင်တက်သွားပြီး နည်းနည်းပျော့ချင်လာတဲ့ မတ်ဟဲထူးလီးတန်ပေါ်မှာ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်ပြီး ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြီးသွားတော့သည်။ '' အား....mmpays....
်Кီားး Aိ်К်Х် ညက မူးသွားလို့ ဘာမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ် တဲ့.။ အိပ်ယာထဲရောက်တာနဲ့ စိတ်တွေလွတ်ပြီး မတ်ဟဲထူးပေါင်ကြားထဲက အတန်ကြီးကို အဖုတ်လေးထဲဆွဲသွင်းမိမှာစိုးလို့...com Page 34 ..။ အိမ်မှာပဲ တစ်နေကုန်နေသည်။ အိမ်မှာ အမေရော မောင်လေးရော ရှိနေတာမို့ သီရိရော၊ မတ်ဟဲထူးရော ဘယ်လိုမှ လှုပ်ရှားဖို့ အခွင့်မသာဘူးဖြစ်နေသည်။ ညဘက် ထမင်းစားပြီးတော့ အမေနဲ့ မောင်လေးက အိပ်ယာဝင်သွားကြသည်။ သီရိကတော့ အိပ်ယာမ၀င်သေးပဲ အိမ်ရှေ့မှာ စာထိုင်ဖတ်နေလိုက်သည်။ စာဖတ်နေတဲ့သီရိကို မတ်ဟဲထူးက တစ်ချက်တစ်ချက်ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်နေသည်။ သီရိမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အသာဆက်နေလိုက်တော့ မသိမသာသန်းပြသေးသည်။ သီရိလည်း မနည်းစိတ်ကိုထိန်းပြီး အိပ်ယာထဲမသွားသေးတာ.။ မနေ့ညက စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ကဲခဲ့ပေမဲ့ မတ်ဟဲထူးပြန်ရောက်တာ ညဉ့်နက်နေတာရော၊ အမေတို့က မင်္ဂလာပွဲကြောင့် အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့်ရော စောစောစီးစီးအိပ်ကုန်ကြလို့ သီရိလုပ်တဲ့အသံတွေမကြားလောက်ဘူး။ ဒီနေ့တော့ စောသေးသည်။ အမေကတော်တော်နဲ့ အိပ်ပျော်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေကိုက်လို့ဆိုပြီး ညလယ်ခေါင်အထိ အိပ်မပျော်တတ်ဘူး။ www.။ ဘာမှမသိတာပါကောင်းပါတယ်။ သိသာသိရင် သီရိ သောင်းကျန်းတာတွေ့ပြီး သူ့မိန်းမတော်တော်နှာထတာပဲ လို့ ထင်သွားလောက်သည်။ သီရိလည်း '' ရပါတယ် မတ်ရယ်'' လို့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ညရောက်ရင် မတ်ဟဲထူးအတန်ကြီးကပေးမဲ့ အရသာကိုထပ်ပြီးခံစားချင်နေသေးသည်။ မတ်ဟဲထူး ဘဏ်ကနေ သုံးရက်ခွင့်ပေးထားလို့ အလုပ်မသွား......mmpays...
.com Page 35 .။ ညအိပ်ခါနီးမို့လို့ အတွင်းခံမ၀တ်ထားတဲ့ သီရိ နို့ဖြူဖြူတွေက နှစ်ပေမီးချောင်းအောက်မှာဖောင်းတင်းနေသည်။ မတ်ဟဲထူး သီရိနို့ကြီးတွေကို မမြင်ဖူးသလိုတော်တော်ကြာအောင် စိုက်ကြည့်နေသည်။ မတ်ဟဲထူးအကြည့်တွေက သီရိကိုမရိုးမရွဖြစ်စေသည်။ '' ဘာလို့ကြည့်နေတာလဲ.. လှလို့ပါ။ '' '' စို့ပေးလေကွာ..။'' သီရိ နို့စို့ပေးဖို့ပြောတော့ စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး မတ်ဟဲထူးမျက်နှာက သီရိရင်ဘတ်ပေါ်ကို ဆတ်ကနဲမှောက်ကျလာသည်။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် မတ်ဟဲထူးကတော့ သီရိနားမှာပဲ မယောင်မလည်နဲ့ လျှောက်ပြန်သံပေးလုပ်နေသည်။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ သီရိ အိပ်ခန်းထဲဝင်လာခဲ့သည်။ အမေတို့ အခန်းထဲက ဟောက်သံတွေထွက်လာပြီမဟုတ်ပါလား။ မတ်ဟဲထူးလည်း သီရိနောက်ကနေ ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့လိုက်ဝင်လာသည်။ သီရိ သူ့ယောက်ျားဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီး ပြုံးမိသေးသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ မတ်ဟဲထူးက သီရိကိုယ်လုံးကိုလက်ညိုးထိုးပြီး တစ်ခုခုပြောသည်။ လေသံနဲ့ပြောတာရော ကရင်အသံက ၀ဲတာကြောင့်ရော ဘာပြောလိုက်မှန်းတော့ သီရိသေသေချာချာမကြားလိုက်ရ..၊ ကြောက်နေသလိုမျိုး..။ ဟိုဟာလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်မည်။ သီရိလည်း ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်သည်။ မတ်ဟဲထူးလုပ်ချင်တာလုပ်ပါစေ။ မတ်ဟဲထူး ကုတင်ပေါ်ကို ကမန်းတကတန်းတက်လာပြီး သီရိ အကျီက နှိပ်ကြယ်သီးတွေကို ဆွဲဖြုတ်သည်။ ကြယ်သီးဖြုတ်တဲ့ မတ်ရဲ့လက်တွေက ကတုန်ကရင်နဲ့......။ '' သီရိ ညုတုတုလေးပြောလိုက်သည်။ '' လှ...mmpays..
နာတယ်..... ကျွတ်ခနဲမြည်အောင်စုတ်သတ်လိုက်သည်။ လုပ်ချင်လိုက်တာလည်းပြာလို့ လုပ်လိုက်တော့လည်း ချာလို့ဆိုတာ မတ်လိုလူမျိုးပဲ. တော်တော့ကွာ.။ သီရိ တွေးရင်းစိတ်မရှည်တော့တာနဲ့ ပေါင်ကြားထဲက လီးကိုလက်နဲ့ ကိုင်ပြီး အဖုတ်ဝမှာတေ့ပေးလိုက်သည်။ မတ်ဟဲထူးလည်း အပေါက်တည့်သွားတာနဲ့ ဆောင့်ထိုးလိုက်တာ တစ်ချက်ထဲနဲ့ အဆုံးထိဝင်သွားသည်။ '' အ.။ '' မတ်ဟဲထူးကမန်းကတန်းနဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ အောက်က အကောင်ကတော့ခေါင်းထောင်နေပြီ။ မတ်ဟဲထူးသီရီပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး အတန်ကို အဖုတ်ဝမှတေ့ပြီး ထိုးထည့်သည်။ သီရိ အဖုတ်က ထွက်နဲ့ အရည်တွေနဲ့ မတ်ဟဲထူးဟာက အထဲကို မ၀င်ပဲ ချော်ထွက်သွားသည်။ အောက်က ငံ့လင့်နေတဲ့သီရိ အားမလိုအားမရနဲ့ ဟာကွာ.။ မတ်ဟဲထူးသီရိနို့အုံလှလှတွေကိုစို့နေသည်။ နို့အုံဆိုတာထက် နို့သီးခေါင်းနီနီလေးကိုတပြွတ်ပြွတ်နဲ့စို့နေတာ။ တကယ့်ကလေးတွေ နို့စို့သလိုမျိုး.။ ဒါမျိုးကျတော့လည်း သွက်လိုက်တာ..။ သီရိ မတ်ဟဲထူးနို့စို့နေတာကို အသာငုံ့ကြည့်ရင်း မတ်.........mmpays..........။ လျှာလုံးဝမပါဘူး... တော်တော်ရိုးအတာပဲလို့ တွေးမိလိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထနေတဲ့သီရိ အတွက် မတ်ဟဲထူးစို့တာကလည်း အရသာတော်တော်ရှိသည်။ တော်တော်ကြာအောင်စို့ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းတွေကျိန်းလာတော့မှ နို့စို့ တာကိုရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ '' မတ်.....။ '' တစ်ချက်ထဲနဲ့ အဆုံးထိဝင်သွားတဲ့ အတန်ကြီးက သားအိမ်ခေါင်းကို သွားဆောင့်လို့ သီရိအောင့်ကနဲဖြစ်သွားရသည်။ '' ပြန်ထုတ်လိုက်ရမလားဟင်..။ လုပ်တော့..်Кီားး Aိ်К်Х် အော်.com Page 36 .။ '' မတ်ဟဲထူး သီရိကို ခပ်တိုးတိုးမေးသည်။ www.
. သီရိ အိပ်ပျော်အောင် မနဲကျိတ်မှိတ်ပြီးအိပ်ရသည်။ www..်Кီားး Aိ်К်Х် '' ရတယ်.။ '' သီရိ ဆီက ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ မတ်ဟဲထူးသီရိအပေါ်မှောက်အိပ်ပြီးဆောင့်သည်။ သူ့ကိုယ်လုံးက သီရိအပေါ်တော့ပိမနေဘူး။ လက်နှစ်ဘက်က ဘေးကို ဒိုက်ထိုးသလိုမျိုးထောက်ထားလို့...။ မတ်ဟဲထူး သီရိအဖုတ်ကို ဇယ်ဆက်သလိုပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်သည်။ သီရိအဖုတ်ထဲက အရည်တွေထွက်နေတာနဲ့ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ အသံတွေထွက်နေသည်။ အချက် သုံးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးတော့ မတ်ဟဲထူးတစ်ယောက် တအင့်အင့်ငြီးရင်း သီရိအဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားသည်။ ပြီး ပြီးချင်းပဲ သီရိကိုယ်ပေါ်ကနေလှိမ့်ဆင်း ပြီး ပုဆိုးကောက်ဝတ်ပြီး သီရိဘေးမှာဝင်အိပ်သည်။ သီရိ ကမပြီးသေးဘူး။ မတ်ဟဲထူးဆောင့်လုပ်တာ ကောင်းကာစပဲရှိသေးတယ်။ အဖုတ်ထဲကရတဲ့ အရသာအကြွင်းအကျန်လေးတွေကို ခံစားရင်း မတ်များထပ်လုပ်မလားဆိုပြီးစောင့်နေသေးသည်။ ခဏနေတော့ မတ်ဟဲထူးဆီက ဟောက်သံကြားရသည်။ ''ဟာကွာ.... ဒီ ကရင်လေးတော့...mmpays....။ ဟူး.။ မထုတ်နဲ့ မတ် ၊ လုပ်တော့.....com Page 37 .။ သီရိ အကျီကြယ်သီးပြန်တပ် ထမိန်ကိုပြန်ပြင်ဝတ်ရင်း တရွရွဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်မိသည်။ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေက ထွက်တုန်းပဲ ......။'' သီရိတစ်ယောက်ထဲမကျေမနပ်နဲ့ ငြီးတွားမိသည်။ လင်ဖြစ်သူက အိပ်နေပြီဆိုမှတော့ သီရိဘာလုပ်လို့ရဦးမှာလဲ။ အိပ်နေတဲ့လူကို ''သီရိမပြီးသေးလို့ တစ်ခါလောက်လုပ်ပေးပါဦး'' လို့ နှိုးပြီးပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ သီရိအဖြစ်က ရယ်ရမလို၊ငိုရမလိုနဲ့ အီလည်လည်ကြီး...
။ အလွန်ဆုံးသုံးလေးမိနစ်ပဲ။ သုံးမိနစ်လောက်ဆောင့်ပြီးတာနဲ့ တရှုးရှုးဖြစ်လာပြီး ပြီးသွားတတ်သည်။ www..com Page 38 ..mmpays.။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ သီရိကို ထမိန်လှန် ၊ အတင်းတက်လုပ်ပြီး အိပ်သွားပြန်သည်။ သီရိလည်း မတ်ဟဲထူးကို ထုတ်ပြောရမှာရှက်တာနဲ့ မတ်ဟဲထူးလုပ်သမျှ ဘာမှမပြောပဲ နေရသည်။ မတ်ဟဲထူးခွင့်ရက် သုံးရက်ကုန်သွားလို့ အလုပ်ဆင်းပြီ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းဆိုတော့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က နေ့ဆိုင်းလည်းရှိသည်၊ ညဆိုင်းလည်းရှိသည်။ နေ့ဆိုင်းဆို တစ်နေကုန် အပေါက်ဝမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လာသမျှလူကို တံခါးဖွင့်ပေးရတာ..်Кီားး Aိ်К်Х် အဖုတ်ထဲက မပြီးသေးတာကြောင့် ရင်တွေက ပူနေတုန်းပဲရှိသေးသည်။ တော်တော်လေး ညဉ့်နက်မှ သီရိ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ ပထမတစ်ရက်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ်မို့လို့နေမှာပါဆိုပြီး စိတ်ဖြေလိုက်သည်။ နောက်နေ့ည ထပ်ပြီး လုပ်တော့လည်း မတ်ဟဲထူးလုပ်ပုံက ပထမနေ့ကအတိုင်းပဲ..။ အပြန်မှာနေပူရင်လည်း ထီးလိုက်မိုးပေးရသည်။ တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်ရတာဆိုပြီး ညဘက်ပြန်ရောက်ရင် ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ အိပ်ရာထဲတန်းဝင်ပြီး အိပ်သွားတော့သည်။ သီရိလည်း မတ်တစ်ယောက် ပင်ပန်းလို့ ဖြစ်နေတာပါလေဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ပြီးနေရသည်။ နေ့ဆိုင်းဆိုရင်ပင်ပန်းလို့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ညဆိုင်းကျတော့ မတ်ကို တွေ့တောင်မတွေ့ရဘူး။ ဘဏ်မှာသွားပြီး ညစောင့်လုပ်ရလို့လေ။ ဂျူတီပြီးလို့ ပြန်ရောက်တော့လည်း တစ်နေကုန်မထပဲအိပ်နေတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ သုံးလေးရက်လောက်မှ တစ်ခါ စိတ်တွေကြွလာပြီး သီရိကို ကမူးရှုးထိုး တက်လုပ်တတ်သည်။ အဲလို လုပ်တိုင်းလည်း ကြာကြာလုပ်နိုင်တာမဟုတ်...
.................. တစ်နေ့...်Кီားး Aိ်К်Х် ကြာလာတော့ သီရိ ဘ၀မှာ လိင်ကိစ္စဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်လာသည်။ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတုန်းကလည်း နာနာကျင်ကျင်နဲ့ အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရသည်။ ယောကျာ်းရတော့မှသာ မင်္ဂလာဦးညမှာ မတ်ဟဲထူးမူးမူးနဲ့ လုပ်တာ ခံဖူးပြီး ကာမအရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားဖူးခဲ့ရသည်။ အဲဒါကလည်း မတ်ဟဲထူးမူးနေလို့။ အရက်တွေအများကြီးသောက်ထားတာနဲ့မူးပြီးလို့ ကြာကြာလုပ်နိုင်တာဖြစ်သည်။ ကြာကြာလုပ်နိုင်အောင် မတ်ဟဲထူးကို ပဲ ညတိုင်းအရက်သောက်ခိုင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ။ အဲလို နဲ့ပဲ သီရိ မတ်ဟဲထူးနဲ့ လက်ထပ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ အခုချိန်ထိ သားသမီးမရသေးဘူး။ ဘယ်သူ့ဘက်ကချို့ယွင်းတာလည်းတော့မသိဘူး။ အမေကလည်း မြေးချီချင်ပြီလို့ သီရိကို တစ်ဖွဖွပြောသည်။ မတ်ဟဲထူးကိုပြန်ပြောပြတော့ ကိုယ်လဲ လုပ်တာပဲလေကွာလို့ပဲ မရေမရာပြန်ပြောသည်။ ...mmpays.................... .......။ သီရိ အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကျသည်။ သီရိတို့နေတဲ့ မြို့ထဲနဲ့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ မြို့စွန်က ဘီယာဆိုင်.......com Page 39 ...........။ ပန်းကုံးစွပ်လို့ရတဲ့ကောင်မလေးတွေသီချင်းဆိုတဲ့ စင်တင်တေးဂီတလည်းရှိသလို၊ ကောင်မလေးတွေကို ဆက်ရှင်ကြေးပေးပြီး အခန်းထဲခေါ်သွင်းလို့ရတဲ့ ကေတီဗီခန်းလည်းရှိသည်။ သီရိကတော့ထုံးစံအတိုင်း ဆိုင်ရှေ့မှာ ခုံလေးခင်းပြီးတော့ အရက်ပုလင်းလေးတွေတင်ပြီး ၀င်လာသမျှလူတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကိုမေးရုံပဲပေါ့။ ဆိုင်ထဲမောင်းဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုတွေ့တော့ သီရိရင်တွေ ခုန်တာမြန်လာသည်။ www....
။ ကိုကြီးကရုပ်လည်းချောသည်၊ သဘောလည်းကောင်းသည်၊ ပိုက်ဆံလည်းရှိပုံရသည်။ ကိုကြီးနဲ့သာ လက်ထပ်ဖြစ်ရင် ပြိုင်ကားလှလှလေးနဲ့ ဖြစ်နေလောက်သည်။ ကိုကြီးက စေတနာလည်းကောင်းတော့ သီရိသာ ကိုကြီးချစ်သူဆိုရင် သီရိလိုချင်တာတွေအကုန်ဝယ်ပေးလောက်သည်။ သီရိနားထောင်ဖူးတဲ့ ဟိုသီချင်းထဲကလိုမျိုးပေါ့....။ ပြိုင်ကားလား ဟတ်စကီးလားဆိုတာ... ကို...။'' ကားပေါ်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ ကိုကြီးမျက်နှာကမလန်းဘူး။ တစ်ခုခုကိုဝမ်းနည်းနေသလိုပဲ။ အ၀င်ဝမှာ သီရိက ဘာသောက်မလဲမေးတော့ စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အရက်ပုလင်းတွေကိုကြည့်ရင်း ပြုံးရောင်သန်းလာပြီး ပုလင်းကြီး တစ်လုံးမှာသွားသည်။ အမြည်းကတော့ကောင်းမယ်ထင်တာ မှာပေးပါတဲ့။ ဆိုင်မှာလူတွေကြပ်နေတာမို့ ကိုကြီး ၀င်လာတာကိုဘယ်သူမှ ဆီးပြီးမမေးကြ. ပြိုင်ကားလေး.်Кီားး Aိ်К်Х် '' အနီရောင် ...mmpays......။ ပြိုင်ကားကတော့ ရှိပြီးသားပဲ.. သီရိက ရှိတယ်......com Page 40 . ၊ ဟိုးကအခန်းလေးတွေထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးသောက်လို့ရတယ်လို့ ပြောလိုက်သည်။ သီရိ စားပွဲထိုးလေးတစ်ယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး ဒီအကိုကြီးက အခန်းတစ်ခန်းယူမယ်လို့ပြောပေးတော့ ကိုကြီးလည်း စားပွဲထိုးလေးနဲ့ ကေတီဗီခန်းလေးထဲပါသွားသည်။ သီရိ ဆိုင်ပေါက်ဝမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကိုကြီးရှိတဲ့ အခန်းလေးကို ကြည့်ရင်း ကိုကြီးအကြောင်းကို တွေးနေမိသည်။ ကိုကြီးနဲ့သာ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်.။ အေးအေးဆေးဆေးတစ်ယောက်ထဲသောက်လို့ရမဲ့နေရာရှိလားလို့ သီရိနားကပ်ပြီး မေးတော့...။ ဒါဆို.. ကိုကြီး...။ www...
..။ လွှတ်ပါ..... ကိုယ့်ဆီလာပါဦးကွာ...။ အခု သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာသီရိရောက်နေပြီ။ သီရိ အပျိုလေးတစ်ယောက်လို ရင်တွေခုန်လာမိသည်။ ကိုကြီးက ဖက်ထားရုံတင်မဟုတ်ပဲ လက်တစ်ဖက်က သီရိခါးကိုပွေ့ရင်း နောက်လက်တစ်ဖက်က သီရိတင်ပါးအိအိနှစ်လုံးကို ပွတ်သတ်နေသည်။ www...com Page 41 ... ''ခေါ်သံကြားလို့ ကြည့်မိတော့ အခန်းဝမှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ကိုကြီး ကိုတွေ့သည်။ သီရိကို လက်တစ်ချောင်းထောင်ပြပြီး အခန်းထဲကို ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ပြန်ဝင်သွားသည်။ အရက်မှာတာဖြစ်မှာပါလေ ဆိုပြီး အရက်ပုလင်းယူပြီး သီရိကိုယ်တိုင်ပဲသွားပို့လိုက်သည်။ ဆိုင်ကစားပွဲထိုးလေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်တော့ သူ့အလုပ်နဲ့သူရှုပ်နေကြသည်။ အခန်းထဲမှာ အရက်သွားချတော့ ကိုကြီး က ဆိုဖာပေါ်မှာ ပက်လက်လန်နေသည်။ ကိုကြီး တော်တော်လေးမူးနေပုံပဲ. မှားနေပြီနော်.။ အရင်က မသောက်ဖူးဘူးလားမသိပါဘူး။ အကို မူးနေပြီထင်နဲ့ ထပ်ပြီးမသောက်တော့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်.mmpays..။ ၀တ်ရည်မဟုတ်ဘူး..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိ အခုဆိုရင် လင်ရှိမယားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ တခြားယောက်ျားအကြောင်းမတွေးတာပဲ ကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီး အတွေးစတွေကို အမြန်ဖြတ်လိုက်ရသည်။ ''ချွတ်ချွတ်.....။ ကားမောင်းပြီးပြန်ရမဲ့ ကိုကြီးကို အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ သီရိ သတိပေးမိသည်။ သီရိအသံကြားတော့ ကိုကြီး မျက်လုံးမှိတ်ထားရာကနေ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်။ ''၀တ်ရည်....။'' သီရိပြောသာပြောနေရတာ ကိုကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ပဲ အလိုက်သင့်လေးပြန်ဖက်ထားမိသည်။ သီရိ ငယ်ငယ်ထဲက စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့ အကို..။ '' ကိုကြီး ဆိုဖာပေါ်ကနေထလာပြီး သီရိကိုယ်လုံးလေးကို ပြေးဖက်သည်။ '' အို.. ကိုကြီး..........
.. ချစ်လိုက်တာကွာ''လို့ တဖွဖွပြောရင်းသီရိ ပါးပြင်ကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ စုပ်ပြီးနမ်းနေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ သီရိ နားရွက်လေးတွေကို နမ်းရင်း လျှာနဲ့ နားရွက်လေးထဲကို ထိုးထိုးကလိတော့ သီရိ ကြက်သီးတွေတောင်ထလာရသည်။ သီရိရဲ့ လည်တိုင်ဝင်းဝင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပြွတ်ခနဲမြည်အောင်စုပ်ရင်း လက်ကလည်းသီရိနို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖျစ်ညှစ်နေသည်။ သီရိ စိတ်တွေကြွလွန်းလို့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင်ထောင်ပြီး စူကြွနေရပြီ။ ကိုကြီးက သီရိကို ဖက်ထားရင်းကနေပဲ ဆိုဖာဆီကို တဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခေါ်သွားလို့ ဆိုဖာနားဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတောင်သီရိမသိလိုက်ရဘူး။ သီရိကိုဖက်ထားရာကနေလွတ်သွားတော့မှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးက ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေရာကနေ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီး သူ့အတန်ကြီးကိုဆဲထွုတ်ထားသည်။ KTV အခန်းလေးထဲက မီးမှိန်မှိန်အောက်မှာ ကိုကြီးအတန်ကြီးက ထောင်မတ်ပြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ဖြစ်နေသည်။ ကြီးတာလည်း အကြီးကြီးပဲ....။'' သီရိတစ်ယောက်ထဲ ခပ်တိုးတိုးပြောရင်း ကိုကြီးပေါင်ကြားထဲမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ကိုကြီးအတန်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကိုကြီး အတန်က ကြီးလွန်းလို့ ပါးစပ်ကို အတော်လေးကျယ်ကျယ်ဟပြီး စုပ်ရသည်။ www.... သီရိ ရှက်သလိုလိုဖြစ်သွားသည်။ သီရိ အခုချိန်ထိတစ်ခါမှာ လီးမစုပ်ဖူး။ သီရိ ကိုကြီးရဲ့ အတန်ကြီးကို ကြည့်ရင်း စိတ်တွေကြွလွန်းလို့ အဖုတ်လေးထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲစိုနေပြီ။ '' ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာကွာ.com Page 42 ...mmpays.။'' အို.။ သီရိတွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးလို့ ပြောရမလိုပဲ။ မတ်ဟဲထူးအတန်နဲ့ဆိုရင် အရှည်ရော အတုတ်ရော တော်တော်လေးကွာတယ်လို့ ပြောရမည်။ ''၀တ်ရည်. စုပ်ပေးဦးကွာ......်Кီားး Aိ်К်Х် ပါးစပ်ကလည်း ''၀တ်ရည်ရယ်.
mmpays....။ www. တော်တော့'' လို့ပြောပြီး ကိုကြီး ဆိုဖာပေါ်ကထလာပြီး သီရိကို ဆိုဖာပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ခိုင်းသည်။ နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကြီး ပေါ်မှာ သီရိ ပက်လက်လေးအိပ်လိုက်သည်။ ကိုကြီးက သီရိဝတ်ထားတဲ့ စကတ်အောက်အနားစကို အပေါ်ကို မရမကဆွဲတင်နေသည်။ သီရိ ဖင်ကို ကြွပေးထားတာတောင် စကတ်က သီရိ ဖင်လုံးကောက်ကောက်နဲ့ ငြိပြီးအပေါ်ကို ဆွဲတင်လို့ မရဘူး။ မထူးတော့ဘူး ဆိုပြီး သီရိ အ၀တ်တွေချွတ်လိုက်သည်။ အင်္ကျီက စကတ်နဲ့ တစ်ဆက်တည်း ဆိုတော့ သီရိကိုယ်လုံးပေါ်မှာ ဘရာစီယာလေးနဲ့ ပင်တီလေးပဲရှိတော့သည်။ သီရိလည်း အချိန်မရှိတာနဲ့ ဘရာနဲ့ ပင်တီကိုပါ တစ်ခါထဲချွတ်လိုက်သည်။ သီရိ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားပြီ။ ဆိုဖာကြီးပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ပေါင်ကားပေးထားတဲ့ သီရိပေါင်ကြားထဲမှာ ကိုကြီးနေရာယူသည်။ သီရိ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲကို သူ့အတန်ကြီးတရစ်ပြီးတရစ်တိုးဝင်လာသည်။ သီရိအဖုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ။ ကိုကြီးကို စုပ်ပေးထားတာကြောင့် အတန်ကြီးမှာ သီရိ သွားရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတာရယ်၊ သီရိအဖုတ်ကလည်း အရည်တွေအများကြီးထွက်နေတာကြောင့် သာတော်သေးသည်။ ကိုကြီးက သူ့ဟာကြီးကို တစ်ခါထဲအဆုံးထိမသွင်းသေးပဲ တစ်ဝက်လောက်နဲ့ နဲနဲခြင်းသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေသည်။ သီရိ လည်း အားမရတော့တာနဲ့ တင်ပါးကြီးကို ကော့ကော့တင်ပေးမိသည်။ ကိုကြီးကို အဆုံးထိ ထည့်စေချင်လှပြီ။ သီရိ စိတ်ထဲဖြစ်နေတာကို သိလို့ပဲလားတော့မသိ.com Page 43 ..်Кီားး Aိ်К်Х် စုပ်ရင်းစုတ်ရင်း အရသာတွေ့လာတာနဲ့ အတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးကို လျှာနဲ့ နေရာအနှံ့ လျက်သည်။ အချောင်းတစ်ချောင်းလုံးကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ မြည်အောင် အားရပါးရနဲ့ စုတ်ပေးနေမိသည်။ သီရိ ရဲ့ လီးစုပ်သံ တပြွတ်ပြွတ်က အခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံနဲ့ အပြိုင်ထွက်နေသည်။ '' ရပြီ.
.်Кီားး Aိ်К်Х် ကိုကြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်လိုက်တာ အတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးသီရိအဖုတ်လေးထဲဝင်သွားသည်။ သီရိအဖုတ်လေး ထဲမှာ အပြည့်ပဲ။ ''အား. ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ်.. နာနာလုပ်ပါကိုကြီးရဲ့..။'' www..'' သီရိ ရဲ့ တရွရွဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေက အပြည့်အသိပ်ဝင်နေတဲ့အတန်ကြီး ကို ဆုပ်ဆုပ်ပြီး ညစ်နေကြသည်။ ကိုကြီးက တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်နေသည်။ အဖုတ်ထဲကို တစ်ချက်တိုးဝင်လာတိုင်း တစ်ချက်ဆိုသလို အီဆိမ့်နေအောင်ကောင်းလှသည်။ ကိုကြီး မြန်မြန်လေး. ကောင်းလာပြီ..... သီရိ မပွင့်တပွင့်လေးတောင်းဆိုမိသည်။ ကိုကြီးရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ မြန်လာသည်။ ခပ်ထွားထွားအတန်ကြီးက သီရိအဖုတ်လေးထဲမှာ လွန်းထိုးသလို အ၀င်အထွက်လုပ်နေကြသည်။ သီရိ အဖုတ်လေးထဲ အတန်ကြီးဝင်ထွက်နေတာကိုခေါင်းလေးအသာငုံ့ရင်း ကြည့်မိသည်။ ကေတီဗီအခန်းလေးရဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ အတန်ကြီးကအရည်တွေနဲ့တင်းပြောင်နေသည်။ ဆီးခုံချင်းရိုက်သံတဖောင်းဖောင်းကလည်း အခန်းလေးထဲမှာဆူညံနေသည်။ အသံလုံခန်းဖြစ်တာမို့သာတော်သေးသည်။ သီရိလည်းအရမ်းကောင်းတာနဲ့ ပါးစပ်ကနေ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ အော်မိအော်ရာတွေအော်ဖြစ်သည်။ ''ကိုကြီးဆောင့်. ကောင်းလိုက်တာ...။ ''အား........။'' ကိုကြီးရဲ့ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေအောက်မှာသီရိတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံးကော့ပျံရင်း ကာမလမ်းဆုံးသို့ တက်ရောက်သွားသည်...com Page 44 ........mmpays.
.. ''ကိုကြီးဆီက အရည်နွေးနွေးတွေ ၀င်လာတာနဲ့ သီရိလည်း တင်ပါးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ကော့တင်ရင်း ခြေချောင်းလေးတွေကုတ်ကွေးသွားပြီး နောက်ထပ်တစ်ချီပြီးသွားရသည်။ ကိုကြီး တစ်ချီပြီးသွားတော့ သီရိကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာ မှောက်ချပြီးအိပ်နေသည်။ သူ့ အတန်ကြီးကတော့ သီရိအဖုတ်လေးထဲက ဆွဲမထုတ်သေးဘူး။ မတောင့်တစ်တောင်အနေအထားတဲ့ တပ်ရပ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ အတန်ကြီးကို www..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိအပေါ်မှာအုပ်မိုးထားတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးကို လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ အသာပွတ်ရင်းပြောလိုက်သည်။ သီရိက သာတစ်ခါပြီးသွားတာ အပေါ်က ဆောင့်နေတဲ့ ကိုကြီးကမပြီးသေးဘူး။ တင်ပါးကိုကော့ကာ ကော့ကာနဲ့ ရေရေလည်လည်ဆောင့်နေသည်။ ကိုကြီးရဲ့ ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းအောက်မှာသီရိ ရဲ့ စိတ်တွေတစ်ခါ ပြန်ပြီး ထကြွလာရသည်။ ဆိုဖာပေါ်က တင်ပါးလုံးလုံးကောက်ကောက်လေးကို ပင့်ကာပင့်ကာနဲ့ ကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။ ကိုကြီးရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ ပိုပိုပြီးမြန်လာသည်။ အားလည်းပိုပြီးပါလာသည်။ ကိုကြီးဆီက နှာမှုတ်သံတရှုးရှုးက ပိုပြီးကျယ်လောင်လာသည်။ ကိုကြီးပြီးတော့မယ်ထင်တယ်.။ သီရိလည်း အဖုတ်လေးထဲမှာ စိတ်ကိုသေချာနှစ်လိုက်ပြီး အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေကိုညှစ်ညှစ်ပြီး အရသာခံနေလိုက်သည်။ ဒီလိုအရသာမျိုးခံစားရတဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ သီရိဘ၀မှာရဖို့ တော်တော်လေး ခဲယဉ်းလှသည်မဟုတ်ပါလား။ သီရိလည်း နောက်တစ်ခါပြီးဆုံးဖို့ နီးကပ်လာတာနဲ့ အတူ အဖုတ်ထဲကလည်း အီစိမ့်နေအောင်ကောင်းလာသည်။ ကိုကြီး အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ခပ်နာနာဆောင့်လိုက်ပြီးတော့ ပူပူနွေးနွေးသုတ်ရည်တွေ သီရိအဖုတ်လေးထဲပန်းထွက်လာသည်။ ကိုကြီးဆီကထွက်တဲ့ အရည်နွေးနွေးတွေက သားအိမ်ခေါင်းထိရောက်အောင်ပဲ ပူဆင်းသွားသည်။ ''အား...com Page 45 .... ကောင်းလိုက်တာ.mmpays.
..com Page 46 ...။ အခန်းထဲက မခွာချင်ခွာချင်နဲ့ သီရိ အခန်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့သည်။ အခန်းတံခါးကို ပြန်ပိတ်ရင်း ကိုကြီးကို တစ်ချက်ကြည့်မိသည်။ ကိုကြီးအိပ်နေတဲ့ပုံက ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲအပြစ်ကင်းစင်လှသည်။ သီရိ မနေနိုင်တာနဲ့ အခန်းထဲတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပြီး ကိုကြီးရဲ့ ပါးပြင်ကို အနမ်းတစ်ပွင့်ပေးလိုက်သည်။ တစ်ခါနမ်းလို့မရတာနဲ့ မျက်နှာတစ်ပြင်းလုံးကို အနမ်းမိုးတွေရွာချလိုက်သည်။ အနမ်းမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးလို့ အားရမှ သီရိ အခန်းလေးထဲက ထွက်လာခဲ့သည်။ အပြင်ရောက်တော့ တစ်ဆိုင်လုံးသူ့အလုပ်နဲ့သူ ရှုပ်နေတာနဲ့ သီရိအဖြစ်ကို ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြဘူး။ သီရိ မတ်တပ်ရပ်နေကျနေရာလေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကိုကြီးရှိနေတဲ့ အခန်းလေးကိုကြည့်ရင်းအတွေးတွေနယ်ချဲ့မိသည်။ သီရိ စိတ်ထဲမှာ အိပ်မက်မက်နေသလိုခံစားရသည်။ ချစ်ရတဲ့ကိုနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေလိုက်ရတာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရသည်။ ကို မူးပြီး လာဖက်တဲ့ အချိန်မှာ သီရိ စိတ်ကို လွတ်ပေးလိုက်မိသည်။ ဘ၀မှာတစ်ခါလောက် ချစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုနဲ့ ချစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂအတွေးကို မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ www.်Кီားး Aိ်К်Х် အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆွဲညှစ်ရင်း ကာမအရသာကို သီရိတစ်ယောက်ပီပီပြင်ပြင်ခံစားနေသည်။ တအောင့်လောက်နေမှ သီရိ ကိုကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကနေ အသာလေးရုန်းထွက်ပြီး အ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ်သည်။ ကိုကြီးကို လည်း အ၀တ်အစားတွေသေချာပြန်ဝတ်ပေးပြီး ဆိုဖာပေါ်မှာ သေသေချာချာလေးနေရာချပေးလိုက်သည်။ ခေါင်းမော့ပြီး မှိန်းနေတဲ့ကိုကြီးရဲ့ မျက်နှာလှလှကို ကြည့်ရင်း သီရိ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရသည်။ ၀မ်းနည်းတာက ကိုကြီးနဲ့ ဒီဘ၀မှာဆုံနိုင်ခွင့်မရှိတော့လို့.mmpays. ၊ ၀မ်းသာတာကတော့ ကိုကြီးနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းလိုက်ရလို့...
..်Кီားး Aိ်К်Х် သီရိရဲ့ အချစ်ကို မူးနေတဲ့ ကိုလည်းသိမှာမဟုတ်.................. .....................com Page 47 ... '' ငါ အဖေဖြစ်ပြီကွ..... www............................. ပြီးပါပြီ .............. ဟားဟား.............................. သုံးလခန့်ကြာသော်............ '' ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးထဲရှိ သီရိရဲ့ အိမ်လေးထဲက အော်သံတစ်ချက်ထွက်လာသည်။ သီရိကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့ ဆရာဝန်ကပြောလိုက်လို့ မတ်ဟဲထူး ၀မ်းသာအားရအော်နေတာ...............mmpays...................................။ မနက်နိုးရင် ကို့ မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာဘာမှကျန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သီရိကောင်းကောင်းသိနေသည်။ ကို့ ကိုချစ်လွန်းလို့ ကို့ကိုဖြည့်ဆီးပေးသွားတဲ့ အညတရ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ................။ သီရိအမေရဲ့ မျက်နှာမှာလည်းအပြုံးတွေတွဲလွဲခိုနေသည်။ အိမ်ထဲမှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းရင်း ပတ်ပြေးနေတဲ့ မတ်ဟဲထူးကို ကြည့်ရင်းသီရိတစ်ချက်ပြုံးမိသည်။ သီရိ အပြုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သီရိမှလွဲ၍ဘယ်သူမှ သိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ..
More From Aung Zaw Lin
8820 Hw Guide
How to Install Myanmar Bible on Your Computer
02-MTCWE-Basic Configuration & Tools.pdf
Redhat Openstack Administrtion-RH-CL210.pdf
2V0 621.Examcollection.premium.exam.218q Unlocked